ပူစူးမ သူ့နာမည်က ပူစူးမ၊ နာမည်ရင်းကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး၊ ရှိတော့ရှိတယ်၊ နာမည်က အရေးမကြီးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က သူ့ကိုပူစူးမ လို့ဘဲ ငယ်ငယ်လေးထဲကခေါ်တယ်၊ အိမ်နားကကောင်မလေး၊ အပျိုဖေါ်ဝင်စ၊ ဘာရှိအုံးမလဲ အသက်က အခုမှ ၁၅နှစ် အလွန်ဆုံး၊ စိတ်ကစားခါစ၊ ဘာမဆိုသူသိချင်သည်၊ ကျွန်တော်တိုအိမ်လည်း သူ့စားအိမ်သောက်အိမ်၊ ၀င်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်၊ ထွက်ချင်တဲ့အ ချိန်ထွက်၊ တံခါးမရှိ ဓားမရှိ၊ အားလုံးကသူ့ကို လျစ်လျုရှု့ထားသည်၊ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အကိုလေး အကိုလေး နှင့် သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်ပမာ၊ ပြောချင်ရာပြော ဆိုချင်ရာဆို၊ တခါတခါ ကျွန်တော့်အခန်းထဲထိ ၀င်ချင်သ လိုဝင်၊ ဘာကိုမှ အလေးမထား၊ သူလုပ်ချင်ရာသူလုပ်သည်။ ကျွန်တော်က ကျောင်းပြီးခါစ၊ အလုပ်အကိုင်ကမရှိသေး၊ စားလိုက် အိပ်လိုက်နဲ့ ယောင်ချာချာ အလုပ်လက်မဲ့၊ အလုပ်လက်မဲ့တို့ ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟေးလားဝါးလား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြော၊ အပြာကားတွေကြည့်၊ ကြာတော့မိန်းမလိုးချင်လာသည်၊ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဖာချသည်၊ ချပါများတော့ အတွေ့အကြုံကရလာသည်၊ ကောင်းမှန်းလဲသိလာသည်။ ဒီတော့ မိန်းမမြင်ရင် တဏှာစိတ်နဲ့ကြည့်မိသည်၊ အဲဒီမှာပူစူးမကို သတိထားမိလာသည်။ ကောင်မလေးက သူ့ကိုသူ အပျိုဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းပင် သိရဲ့လားမသိ၊ နေချင်သလိုနေသည်၊ တခါတခါ အတွင်းခံ ရင်စည်း မပါဘဲ အိမ်လာသည်၊ ကျွန်တော်က ဒါတွေချောင်းနေတဲ့ သူဆိုတော့ မြင်သည်၊ စိတ်ကပိုရွလာသည်၊ ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ကြည့်ချင်လာသည်။ ကျွန်တော့်မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် ပူစူးမက တနေ့ထက် တနေ့ လှလှလာ သည်။ ရင်တွေ တင်တွေ ပြည့်ဖြိုးလာသည်၊ တခါတခါ စသလို နောက်သလိုနဲ့ သွေးတိုးစမ်းပြီး သူ့ပုခုံးလေးကို တင်းတင်းဖက် ကြည့်သည်၊ ကောင်မလေး ကဘာမှမပြောတဲ့အပြင် ကျွန်တော့်ခါးကလေးကိုပင် ပြန်ဖက်လိုက် သေး၊ အကိုတယောက်လိုသဘောထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ချင်စိတ် ကတနေ့တခြားပြင်းထန်လာသည်၊ ဒီအတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ် တခုခုတော့လုပ်မှဖြစ်မယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကြံစမ်း၊ ကြံစမ်း၊ အကြံထုတ်ရသည်၊ ဒီအတိုင်း ဘလိုင်းချည်း သွားကိုင်လို့ကမဖြစ်၊ မကြည်ရင် ပြသနာက မိုး မီးလောင်သွားနိုင်သည်၊ ပြီးတော့ ခလေးကို ကြံရကောင်းလားဆိုပြီး ကျွန်တော့် ဘ၀တလျှောက်လုံး အမဲစက် ထင်သွားနိုင်သည်၊ ဒီလိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်၊ ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာ နှစ်ဦး သဘောတူမှကောင်းသည်၊ နှစ်ဦး သဘော တူမှလည်း နှစ်ဦးစလုံးဆန္ဒပြည့်ဝမည်။ ပြဿနာလည်းရှင်းသည်၊ ဒီတော့ အကြံထုတ်ရသည်၊ အခွင့်ကောင်းကို စောင့်ရသည်၊ ကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ဖတ်ခဲ့ဘူးသောဇတ်လမ်းများထဲမှ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြာင်းအချက်လေးများရှာရသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ တနေ့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိ ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော့အခန်းထဲမှာ 0x¦Kzတ်နေသည်၊ ဒီအချိန်မှာ ပူစူးမရောက်လာ သည်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်းအကြံရတာနဲ့ စာအုပ်ကို အသာချ၊ မျက်နှာပေါ် ခေါင်းအုံးတင်ပြီး အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်၊ ခေါင်းအုံးအောက်ကနေ အသာလေး ခိုးကြည့်လို့ရအောင် ဟထား၊ ၀တ်ထားတဲ့ လုံချည်ကို ဖြေ၊ အောက်ကို အသာလျှော ပြီး ကျွန်တော့် လီးကို မပေါ့်တပေါ်လေးထားပြီး အသာငြိမ်နေလိုက်တယ်။ ပူစူးမလဲ အိမ်ထဲ မှာဘယ်သူမှမတွေ့တာနဲ့ အပေါ်ထပ်ကိုတက်လာတယ်၊ ပါးစပ်မှလည်း ကြီးမေ .. အကိုလေး .. စသည်ဖြင့် နာမည်တွေခေါ်လို့ပေါ့၊ ကျွန်တော့် အခန်းက တံခါးဟထားတော့ တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်၊ ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတွေ့သွားတော့ အဲတော့ .. အကိုလေးက အိပ်နေတာကိုး .. တယောက်ထဲပြောရင်း အနားကပ်လာတယ်၊ အနားရောက်လာ တော့ အို့ .. ဟုအာမေဋိတ် သံပြုရင်း ပါးစပ်ကို လက်ဝါးနဲ့ အသာအုပ်ရင်း ရပ်သွားတယ်၊ မပေါ့်တပေါ် ဖေါ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကိုတွေ့သွားတာကိုး၊ ကျွန်တော်လဲ သူဘာဆက်လုပ်မလဲ အသာစောင့်ကြည့်နေလိုက် တယ်၊ အသက်မှန်မှန်ရှုရင်း အိပ်မောကျနေတဲ့ ပုံမျိုး ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်၊ ကျွန်တော့်ကို တချက်ကြည့်ပြီး အိပ်မောကျနေတာလို့ ယုံကြည်သွားတဲ့ဟန်နဲ့ မပေါ့်တပေါ် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို သေသေချာချာကြည့်နေ တယ်၊ လီးကို အမွေးမဲမဲတွေဖုံးနေတဲ့ ဆီးခုံစပ်အရင်းပိုင်းလောက်ဘဲ ဖေါ်ထားတော့ စိတ်ထဲကမရိုးမရွဖြစ်လာ ဟန်တူပါရဲ့၊ အိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို တချက်ကြည့်ပြီး ပြေလျှော့နေတဲ့ လုံချည်ကို အသာကိုင်ပြီး အောက်ကိုဆွဲ ချလိုက်တယ်၊ လီးတချောင်းလုံး လွတ်လွတ်ကြွတ်ကြွတ်ပေါ်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ သေသေချာချာ ကြည့်ရှု့နေ လေရဲ့၊ ကျွန်တော့်လီးကလဲ ကြည့်ပါအုံး၊ ရိုးရိုးသာမန်အချိန်မှာတောင် ဒစ်ကလန်နေပြီး အရှည်က ၄လက္မ လောက်ရှိပြီး လုံးပတ်က လက်တဆုတ်စာလောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူသေသေချာချာကြည့်နေတာ ကိုခေါင်းအုံးအောက် ကနေခိုးကြည့်ရင်း စိတ်ထလာသလို ကျွန်တော့လီးကလဲ တဖြေးဖြေး ထောင်လာတယ်။ လူကတော့ အိပ်ပျော်နေ ဟန်ဆောင်ပေမဲ့ တကယ်မှအိပ်မပျော်တော့ လီးကထောင်လာတာပေါ့၊ တဖြေးဖြေးထောင်လာတဲ့ လီးကို ကြည့်ပြီး အံ့သြဟန်နဲ့ အဲတော့ .. ဟုရည်ရွတ်ရင်း ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ကာ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်၊ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် အတွင်းမှာဘဲ ကျွန်တော့်လီးဟာ ၂ဆကျော် ၃ဆနီးပါးလောက်ကြီးလာတယ်။ ဒစ်ဟာလဲ ပိုပြဲပြီး ပိုလန်လာ တယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း တဆတ်ဆတ်တုန်လို့ပေါ့၊ ပူစူးမလဲ အံ့သြဟန်နဲ့ ကြည့်နေပြီး ကိုင်ကြည့်ဘို့ထင် ပါရဲ့ လက်ကတဖြေးဖြေးရှေ့ကိုတိုးလာပြီးမှ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ မကိုင်တော့ဘဲ ကျွန်တော့်အခန်းထဲက ပြန်ပြေးထွက်သွားတော့သည်။ ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း အင်း ဒီကောင်မလေး အခြေအနေက မဆိုးဟု စိတ်ထဲ မှ ထင်မြင်ချက်ပေးရင်း နောက်တဆင့်တိုးဘို့ အကြံထုတ်ရပြန်သည်။ အင်း ဒီနေ့လဲ မနေ့ကလိုဘဲ အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိ၊ မေမေတို့ကဒီလိုဘဲ တခါတခါ ဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စ အလုပ်ကို ရှုတ်သည်၊ ဘာတွေရှုတ်မှန်းမသိ၊ ဒီလို အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတုန်း ပူစူးမလာရင်ကောင်မယ် ဟုစိတ်ထဲမှတမ်းတ မိသည်၊ ရာသီဥတုကနဲနဲပူတော့ အင်္ကျီချွတ်ပြီး အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ မနေ့ကအဆက် တရုပ်သိုင်း0x¦Kuိုဆက်ဖတ် နေလိုက်သည်၊ ဟော လာပါပြီ၊ မနေ့ကလို အသံတကြော်ကြော်ပေးရင်း ၀င်လာချင်းမျိုးတော့မဟုတ်၊ တံခါးတွန်းဖွင့်ပြီး တိုးတိုး တိတ်တိတ်ဘဲဝင်လာသည်၊ ကျွန်တော်က နားစွင့်နေသူဆိုတော့ ကြားနေရသည်၊ အောက်ထပ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိ ဘူး ဆိုတာသိတော့ ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာ တန်းတက်လာသည်၊ အင်း ကောင်မလေး မနေ့ကလို ဘဲ ကြည့်ချင် ဟန်တူရဲ့၊ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်က ဘာမှဟန်မဆောင်၊ ပုံမှန်အတိုင်း စာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်နေလိုက်သည်။ ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးကို သူတွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ သူထင်သလို ကျွန်တော် အိပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ စာဖတ်နေ တာမြင်ရတော့ ခဏကြောင်သွားသည်၊ ဟော .. ပူစူးမ ပါလား .. လာလေ .. ကျွန်တော်က ချက်ချင်းဘဲ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ပူစူးမက အထဲဝင်လာရင်း ဒီနေ့တော့ အကိုလေး ကအိပ်မနေပါလား .. လာ ထိုင် ... ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် ဘေးက နေရာလွတ်ကို လက်ဖြင့်ပုတ်ပြရင်းပြောလိုက်သည်။ မနေ့က ပူစူးမလာတော့ အကိုလေးက အိပ်နေတယ် သိလား .. ဟု ၀င်ထိုင်ရင်း ပြောသည်။ ဟုတ်လား .. မနေ့က ပူစူးမ လာသေးတယ်လား .. အကိုလေးတောင်မသိဘူး .. ဘယ်သိမလဲ .. အိပ်ပျော်နေတာကိုး .. ဟင်း .. မပြောချင်ပါဘူး .. ဘာမပြောချင်တာလဲ ... ဘာဖြစ်လို့လဲ ... ကျွန်တော်က မသိချင်ဟန်ဆောင်၍မေးလိုက်သည်။ မပြောချင်ပါဘူးဆို .. ပူစူးမ က မျက်စောင်းထိုးရင်း မူနွဲ့နွဲ့ ဟန်လေးနဲ့ဖြေသည်၊ အာ .. မပြောချင်ပါဘူးဆိုမှ ပိုသိချင်လာတယ် ... ဟုဆိုရင်း ပိုသိချင်လာဟန်ဖြင့် ပူစူးကဘက်တစောင်းလှည့် တိုးကာ လက်မောင်း၂ဖက်ကို ကိုင်ပြီးမေးလိုက် သည်၊ အခုလိုတိုးလိုက်တော့မှ အခြေအနေကပိုဆိုးကာ ကျွန်တော့်လီးနဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ပူစူးမတင်ပါးထိမိသွားသည်၊ ထိမိသွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပြန်မခွာတော့ဘဲ ပို၍တိုးကပ်လိုက်ပြီး၊ ပြော .. ပူစူးမ .. ပြောကွာ .. ပြော ပြော .. ဟု စိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့် ပူစူးမ ကိုယ်လေးအား လှုတ်ခါ အတင်းအကြပ် ဟန်ဖြင့် မေးလိုက်သည်။ ပူစူးမ က ဘာဖြစ်ရမှာလဲ ... ဟင်း အိပ်နေတာများ ... လုံချည်ကြီးတောင်လန်လို့ .. ဟာ .. ဒုက္ခပါဘဲ .. ကျွန်တော်က ရှက်ဟန်ဖြင့် ကိုင်ထားသော ပူစူးမ လက်ကို လွှတ်လိုက်ရင်း ပူစူးမ တွေ့သွားသေးလား .. ဟုမသိချင်ဟန်ဆောင်၍မေးလိုက်သည်၊ ဘာ တွေ့သွားသေးလားလဲ .. အခုမှ ရှက်မနေနဲ့ ... တွေ့တာမှ အားလုံးကို တွေ့ပါသတဲ့ရှင် ... ဟာ .. ဒုက္ခပါဘဲ .. ပြောပါအုံး .. ဘာတွေတွေ့သွားတာလဲ .. ဘာတွေရမှာလဲ .. အကိုလေး ဒီဟာကြီးပေါ့ .. ကျွန်တော့်လီးနေရာကို မျက်စောင်းဖြင့်ပြရင်း ဟင်း ဒီကကြည့်နေမှ .. အကိုလေး ဟာကြီးက ပိုကြီးလာတယ် ... ဒုတ်ချောင်းကြီးကြနေတာဘဲ .. ဟာ ... ရှက်စရာကြီး ပူစူးမရာ ... ဘယ်သူမှလျှောက်မပြောနဲ့နော် .. အင်း မပြောပါဘူး အကိုလေးကလဲ .. အခုတောင် အကိုလေး အိပ်ပျော်နေရင် မြင်ရအုံးမလား ဆိုပြီး တိတ်တိတ် လေးဝင်လာတာ .. အကိုလေးက မအိပ်ဘဲ စာဖတ်နေလို့ .. ရှင်းရှင်းပြောတတ်သော ပူစူးမကို ကျွန်တော် တော်တော်သဘောကျသွားမိပါသည်၊ ဒီပုံအတိုင်းဆို အခြေအနေက အတော်ကောင်းတာဘဲ ဟု စိတ်ထဲက ကျိတ်ဝမ်းသာရင်း၊ ပူစူးမ ကထပ်ကြည့်ချင်သေးတာလား .. ဒါဆိုအကိုလေးပြမှာပေါ့ .. ဟင်အင်း .. အခုမကြည့်ချင်ပါဘူး .. အကိုလေးမှ အိပ်မနေတဲ့ဟာကို .. ရှက်စရာကြီး .. အခုမှတော့ ရှက်မနေနဲ့တော့ ပူစူးမရာ .. မထူးတော့ပါဘူး .. တွေ့လဲတွေ့ပြီးပြီဘဲ .. ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော်က လုံချည်ကို အသာဖြေလျှော့ပြီး ချွတ်လိုက်ပါသည်၊ ကဲ ကြည့် .. ပူစူးမ .. ဟုဆိုကာ ပူစူးမ ကိုယ်လေးကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ဘက်အသာဆွဲလှည့်လိုက်ပါသည်၊ ပူစူးမလဲ အ၀တ်အစားမဲ့နေသော ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး ကို စိတ်ဝင်စားစွာ သေသေချာချာကြည့်နေပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေသော ပူစူးမကို ကြည့်ရင်း တဏှာစိတ်များကြွကာ လီးမှာ မနေ့ကအတိုင်း ထောင်မတ်လာပါသည်၊ ပူစူးမလဲ ထောင်မတ်လာသော ကျွန်တော့်လီးကို အံ့သြဟန်နဲ့ ကြည့်ရင်း၊ အကိုလေး .. အကိုလေး ဟာက အကြီးကြီးဘဲနော် .. ကြောက်စရာကြီး ဟာ .. ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ .. ကိုင်ကြည့်ဘာလား .. ဟာ .. မကိုင်ချင်ပါဘူး .. အသဲယားစရာကြီး .. ကြည့်ရတာတောင် စိတ်ထဲယားကျိကျိနဲ့ ဒါဆို ... မျက်စိမှိတ် .. ပေး လက် ပူစူးမ လက်ကိုဆွဲယူပြီး ကျွန်တော့်လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပူစူးမ က မ၀ံ့မရဲနှင့် အသာဆုတ်ကိုင်ထားပါ သည်။ အကိုလေး .. အကိုလေး ပာာက နွေးနွေးလေးနော် .. ကိုင်လို့ကောင်းလား အင်း .. တမျိုးဘဲ .. ပူစူးမ က ပိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီး အားစိုက်ကာ ကျွန်တော့်လီးကို ညှစ်ကြည့်ပါသည်။ နာလား အကိုလေး .. ဟင်အင်း .. ဒီလိုကစားရတယ် ပြောပြောဆိုဆို ပူစူးမ လက်ကို ကိုင်ကာ အထက်အောက် စုန်ဆန် ပွတ်ကာ ဂွင်းတိုက်နည်းသင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ပူစူးမက ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အတိုင်း ဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖီလင်တက်ကာ စည်းစိမ်ရစ်အရသာတွေ့နေပါတယ်။ အကိုလေး .. ကောင်းလားဟင် အင်း .. ကောင်းတယ် .. ကောင်းတယ် .. ဆက်လုပ် .. နောက်လက်တဖက်က ဂွေးဥ ကို ကိုင်ထားပါလား အင်း .. ပာုပြောပြောဆိုဆို လက်တဖက်က ကျွန်တော့်ဂွေးဥလေးကိုဖွဖွလေးကိုင်ကာ ကစားနေပါသည်။ မနေ့ကတဲက အကိုလေး ဟာကို ကိုင်ကြည့်ချင်နေတာ၊ အကိုလေးနိုးသွားမှာစိုးလို့ ဒါဆို . ဒီနေ့ကစပြီး ပူစူးမ ကိုင်ချင်တဲ့အချိန်လာကိုင် .. တကယ်လား အကိုလေး အင်း .. ဟုတ်ပြီ .. ဟုတ်ပြီ . ဒီအတိုင်းသွက်သွက်လေးလုပ် .. တော်ကြာ အရည်တွေထွက်လာတော့မယ်၊
ခဏနေတော့ ကျွန်တော်လဲ တက်လာတဲ့ဖီလင်ကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရည်များကိုပန်းလွှတ်လိုက်ပါတော့
သုတ်ရည်တွေလေ၊ ပူစူးမလုပ်ပေးတာကောင်းလို့ အကိုလေးသုတ်ရည်တွေထွက်ကုန်တာပေါ့
ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်တွေနော် တခါမှမတွေ့ဘူးဘူး၊ စေးကပ်ကပ်နဲ့
ကဲကဲ အ၀တ်နဲ့သုတ်ပြစ်လိုက်၊ပူစူးမက ကျွန်တော့်ပုဆိုးနဲ့ ပေနေသောသုတ်ရည်များကို သုတ်နေပါသည်။ ပြီးတော့ဟင် .. အကိုလေး ခုတော့ အကိုလေးဟာက ပျော့သွားပြီနော် ပြီးတော့ သေးလဲသေးသွားတယ်၊
ဟုတ်တယ် ပူစူးမရဲ့ သုတ်ရည်တွေထွက်ပြီးသွားရင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်၊လာ ပူစူးမ ဒီမှာလာအိပ် .. အကိုလေးပူစူးမကို တလှည့်လုပ်ပေးမယ်ဘာလုပ်ပေးမလို့လဲ အကိုလေးရဲ့အကိုလေး လိုဘဲ အမြင့်ဆုံး စည်းစိမ်ရအောင်လို့ပေါ့ဘယ်လိုအမြင့်ဆုံးစည်းစိမ်လဲဟင်လာပါ ဒီမှာလာအိပ်ပါ ပူစူးမသိရမှာပေါ့ပြောပြောဆိုဆို ပူစူးမလက်ကိုဆွဲကာ ကျွန်တော့်အိပ်ယာပေါ်တွင်လှဲချလိုက်ပါသည်။အကိုလေးက ပူစူးကိုလင်မယားတွေလုပ်သလိုလုပ်မလို့လားလင်မယားတွေက ဘာလုပ်လို့လဲဟိုဟာလေ .. အကိုလေးကလဲ ပူစူးပြောမထွက်ဘူးဘာလဲ .. လိုးတာကိုပြောတာလားအင်း အင်း .. အကိုလေးကပူစူးကို အဲဒီလိုလုပ်မလို့လားဟင်အင်း အဲဒါလဲလုပ်မယ်၊ မလိုးခင် ပူစူးတကိုယ်လုံးကို နမ်းပေးအုန်းမယ်
ဘာကြောက်တာလဲ စောစောက အကိုလေး လီးကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတုန်းကမကြောက်ဘူးလား
အခုလဲ အရဲစွန့်ပြီး စမ်းကြည့်ပေါ့
စမ်းလဲစမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ ကြောက်လဲကြောက်တယ်၊ ပြီးတော့ ပူစူးစိတ်ထဲမှာလဲတမျိုးဘဲ
စောစောက ကျွန်တော့်လီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးခဲ့တဲ့ အရှိန်ကြောင့် ပူစူးမရင်ထဲတွင် လည်းကာမဆန္ဒကိုခံစားကြည့်
မကြောက်ပါနဲ့ ပူစူးမရာ အကိုလေး အတင်းမလုပ်ပါဘူး ဖြေးဖြေးလေးလုပ်မှာပါ
အင်းပါ ပူစူးမကလဲ အကိုလေး ပူစူးမကို နာအောင်လုပ်ပါ့မလား
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမကိုပြောရင်း ပူစူးမအင်္ကျီကြယ်သီးများကိုဖြုတ်နေပါသည်၊ ကြယ်သီးများပြုတ်သွားသော
အခါမှာတော့ ပူစူးမကို အသာဆွဲယူကာ အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပါသည်၊တပြိုင်တည်းမှာဘဲ ဘော်လီအင်္ကျီချိတ်ကို
ဖြုတ်ကာ ချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ အင်္ကျီကျွတ်သွားသော အခါမှာတော့ လုံးကျစ်နေသော လက်သီးဆုတ်သာသာ
ဟင်း ဟင်း အကိုလေး ယားတယ်
ပူစူးမတကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်၍ ကြက်သီးမွှေးလေးများပင်ထလာပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ အသာရပ်လိုက်ပြီး
နှုတ်ခမ်းအစုံကို စုတ်ယူလိုက်ပါသည်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လျှာကို ပူစူးမပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ကာ လျှာ လျှာခြင်း
ပွတ်ကစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပူစူးမလဲ မျက်လုံးများမှေးစင်းကာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကိုပြန်လည်သိုင်းဖက်
လာပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ လျှာကိုစုတ်ယူလိုက်၊ ပွတ်ကစားလိုက်နဲ့ ပူစူးမစိတ် ထသထက်ထအောင်
ဆွပေးနေပါသည်၊ လက်တဖက်ကလဲ နို့အုံလေးကိုဆုတ်နယ်၍ နို့သီးထိပ်လေးကို လက်ညိုးနဲ့လက်မကြားချေက
စားပေးနေမိပါသည်။ ပူစူးမလဲ စိတ်က ရွသထက်ရွလာကာ ကျွန်တော့်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးပြန်ဖက်ကာ
ပါးစပ်ကလဲ တဟင်းဟင်း နှင့်ညီးငြူနေပါတော့သည်။
အင်း .. ကောင်းတယ် အကိုလေးရာ စိတ်ထဲမှာ ယားကျိကျိနဲ့ တမျိုးဘဲ
ကျွန်တော်လဲ တဆင့်တိုး၍ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းနေရာမှ တဖြေးဖြေး လည်တိုင် ပြီးတော့ လုံးဝန်းတဲ့ နို့အုံပေါ်က
နို့သီးလေးကို အသာအယာစုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပူစူးမလဲ ကော့တက်လာကာ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကိုင်
ရင်း ကိုယ်ကိုတွန့်လိမ်ကာ အရသာတွေ့နေပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း နို့သီးခေါင်းကိုတဖက်ကစို့ နို့အုံကိုတဖက်ကကိုင်ကစားလိုက်၊ ရင်ညွန့်လည်တိုင်တလျှောက်
လျှာနဲ့ရက်လိုက် နို့အုံ ၂ဖက်လုံးကို လက်နဲ့ဖွဖွလေးပွတ်နယ်ချေပေးလိုက်နဲ့ ပူစူးမ အပေါ်ပိုင်းတခုလုံးကို
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော် လုပ်သမျှ တဟင်းဟင်း နဲ့ ငြီးညူရင်း ကိုယ်ကိုတွန့်လိမ်ကာ အရသာတွေ့ အကြေနပ်ကြီး
အင်း .. ကောင်းတယ် အကိုလေးရာ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုမသိဘူး၊ ဒီလိုအရသာမျိုးတခါမှမခံဘူးဘူး ..
ဒါတောင်အကိုလေးက ပူစူးမ စောက်ဖုတ်ကို မကိုင်ရသေးဘူး၊ စောက်ဖုတ်ကိုသာ ပွတ်ကစားပေးလိုက်ရင် ပူစူးမ
မိုးပေါ်ကိုရောက်သွားမယ် ... သိလား
ဟုတ်ရဲ့လား အကိုလေးရာ .. အခုတောင် ဒီလောက် ခံလို့ကောင်းနေတာ .. ဒီထက်ပိုကောင်းနိုင်ပါ့အုံးမလား ...
ကဲ ဒီလိုဆို လက်တွေ့သိရအောင် ...
ပြောရင်း ပူစူးမရဲ့ ထမီကို အသာဖြေလျှော့ကာ ထမီအောက်လက်ထိုးထည့်လိုက်ပါသည်၊ ထမီအောက်တွင်
အတွင်းခံဘောင်းဘီတထပ် ခံထားတာ စမ်းမိပြီး လက်ကို ဘောင်းဘီအောက်ထိုးထဲ့လိုက်သော အခါမတော့
ဆီးခုံစပ်တွင် ခပ်ရေးရေးလေး စပေါက်နေသော အမွေးနုနုလေးများကိုစမ်းမိပါသည်။ အမွေးနုနုလေးများပေါက်
နေတဲ့ ဆီးခုံစပ်ကို အသာပွတ်ကစားပေးရင်း ပူစူးမကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမတော့ မျက်တောင်များမှေးစင်းကာ
အရသာ အတွေ့ထူးကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ ဇိမ်ခံကြေနပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ကျွန်တော့်လက်တဖက်က ပူစူးမ ပေါင်ကို ဆွဲယူကာ ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်ပါသည်။ ပူစူးမ၏လက်တ
ဖက်ကိုလဲ ဆွဲယူကာ ကျွန်တော့်လီးကို ပေးကိုင်ထားလိုက်ပါသည်၊ အခုဆိုရင် ပူစူးမက ပက်လက်ကလေး
အိပ်ပြီး ခြေထောက်တဖက်က ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်မှာ တဖက်ကဆန့်လျှက်၊ ကျွန်တော်က ပူစူးမဘက် တစောင်း
လှဲလျှက် လက်တဖက်က ပူစူးမလည်တိုင်အောက်မှာ လက်တဖက်က ပူစူးမ ဆီးစပ်ကို ပွတ်သတ်ကစားလျှက်ရှိ
နေပါသည်၊ ပူစူးမကလဲ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ထောင်မတ်လာသော ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကစားလျှက်ရှိပါတော့သည်။
ကျွန်တော်လည်း ဆီးခုံလေးကို ပွတ်သတ်ကစားနေရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ပူစူးမစောက်ဖုတ်ပေါ်လက်တင်ကာ
စောက်ဖုတ်တပြင်လုံးကို ပွတ်သတ်ကစားပေးလိုက်တဲ့အခါမတော့ တည့်တည့်ဆန့်ထားတဲ့ ခြေထောက် ဟာဘေးကိုကားသွားပြီး ပေါင်ဖြဲပေးသလိုဖြစ်သွားကာ လွတ်လွတ်ကြွတ်ကြွတ်ပွတ်သတ်ကစားနိုင်အောင်ကျယ်ဝန်း
လာပါသည်၊ ပူစူးမစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်မှ တစိမ့်စိမ့် စီးကျနေသော အရည်ကြည်များနဲ့ဘောင်းဘီတခုလုံး ရွှဲစိုနေပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ စောက်ဖုတ်တခုလုံးကို ပွတ်သတ်ကစားရုံမျှမက နို့သီးလေးများကိုပါ ငုံ့စို့လိုက်၊ နှုတ်ခမ်း နဲ့ လျှာများကိုစုတ်ယူနမ်းလိုက်နဲ့ စိတ်ထင်သလို သောင်းကျန်းနေပါတော့သည်။
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော်လုပ်ရင်လုပ်သလို အရသာ အတက်အကျပေါ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို တင်းတင်းလေးဖြစ်0x150ှစ်လိုက်၊ သွက်သွက်လေးဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်နဲ့ တုန့်ပြန်နေရှာပါသည်။
ကျွန်တော်လဲ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သတ်နေရင်း အကွဲကြောင်းထဲ လက်ခလည်ကိုနှစ်ကာ အတွင်းသား
အိုး .. ဟင်း ဟင်း ဟင်း ...
မပွင့်တပွင့် ငြီးတွားသံနဲ့အတူ ကားနေတဲ့ ပေါင်တချောင်းဟာ စေ့လာပြီး ကျွန်တော့်လီးကို တင်းတင်းလေးဖြစ်
အကိုလေး .. ကျင်တယ် .. ပူစူး မခံနိုင်ဘူး
အဲတာ ကျင်တာ မဟုတ်ဘူး ပူစူးမ .. အရသာ အရသာ .. သေသေချာချာ ခံကြည့်
ပြောရင်း စောက်စေ့လေးကို မထိတထိလေး ကလိလိုက်ပြန်ပါတယ်၊
အကိုလေး ဖြေးဖြေးလေးဘဲ ကိုင်နော် .. တအားဆို ပူစူး မခံနိုင်ဘူး .. အရမ်းကျင်တာ .. ဖြေးဖြေးလေးဆိုပူစူး
အင်း .. ပူစူး သဘော
ဟုဆိုရင်း စောက်စေ့ကလေးကို အသာရွရွလေး ပွတ်သတ်ပေးနေပါသည်။
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့်လီးကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ကာ မျက်စေ့မှေးစင်းကာ အရသာတွေ့နေပါတော့သည်။
ကျွန်တော်လည်း ရွရွကလေးပွတ်သတ်ကစားရင်းက တခါတခါ ကြမ်းကြမ်းလေးပွတ်လိုက်နဲ့ ပူစူးမ ကာမ
အရသာကို အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်အောင်ဆွပေးနေပါတော့သည်၊ ပူစူးမလဲ ဖီလင်တက်လာလျှင် တက်လာသ
လောက်ကျွန်တော့်လီးကို သွက်သွက်လေးတဖုံ မှန်မှန်လေးတမျိုးဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးနေပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ ခဏလေးကြာတော့ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့် လီးကိုတအားဖြစ်0x150ှစ်ရင်း အကြောအချင်များတင်းကာ
ဟု အသံရှည်နှင့်ငြီးညူရင်း ငြိမ်ကျသွားပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လဲ သူ့ကိုပွတ်ပေးနေတာခဏရပ်လိုက်ပြီး
ပူစူး အကိုလေးကို သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးစမ်းပါ .. အကိုလေးလဲ ပြီးခါနီးပြီ ..
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်လီးကို သွက်သွက်လေး တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေး
လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်လဲ အကြောအချင်များတင်းလာကာ ဒုတိယအကြီမ် သုတ်ရည်များကို ထုတ်
ပူစူမ .. အကိုလေးပြောတာယုံပြီမဟုတ်လား ..
အင်း .. အခုဟာက ပိုကောင်းတယ်နော် .. ပူစူးဖြင့်ပီးတောင်ပီးသွားတယ် .. တခါမှ ဒီလိုမပီးဘူးပါဘူး ..
လုပ်လို့တောင် မ၀သေးဘူး အကိုလေးရာ .. ထပ်ပြီးပြီးချင်သေးတယ်
ပူစူးမ က ကျွန်တော့်ကိုဖက်ပြီးပြောသည်။ အင်း ဒီကောင်မလေးတော့ အကြိုက်တွေ့သွားပြီ။
ဒါတောင် ပူစူးမကို အကိုလေးက မလိုးရသေးဘူး .. လိုးရင် ဒါထက်ကောင်းမှာ .. သိရဲ့လား ..
ဒါထက်ကောင်းမှာလား .. ဒါဆိုလဲ လိုးစမ်းပါ အကိုလေးရာ ..
ဒီနေ့တော့ အချိန်မရှိတော့ဘူး ပူစူးမ .. တော်ကြာမေမေတို့ ပြန်လာလို့ တွေ့သွားမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုံးမယ် ..နောက်တခါကျတော့ လိုးကြတာပေါ့ .. ဟုတ်ပြီလား
ဟာ ဟုတ်သားဘဲ .. ကြီးမေ ပြန်မရောက်ခင်ပြန်မှ .. တော်ကြာ တွေ့သွားအုံးမယ် ..
ပူစူးမ မပြန်ခင် စာအုပ်တအုပ်ပေးလိုက်အုံးမယ် .. အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကြည့်ဘို့ ...
ဘာ စာအုပ်လဲဟင် ..
အပြာစာအုပ်ပေါ့ ... အထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေပါတယ် .. အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကြည့်ပေါ့ .. ဘယ်သူမှမတွေ့စေနဲ့အုံး ..
အင်း .. ပူစူးမ ဖွက်ထားမှာပေါ့ ..
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမကို လီးစုတ်နေတဲ့ ပုံတွေ၊ စောက်ဖုတ်ကို ရက်နေတဲ့ပုံတွေ၊ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်နေတဲ့ပုံ
တွေ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးနေတဲ့ပုံတွေပါသောစာအုပ်ကို ပူစူးမအား ကြည့်ဖို့ပေးလိုက်ပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်ကျော်မျှကြာသွားသည်၊ ပူစူးမနှင့် ထပ်တွေ့ဘို့က အခွင့်အရေးကမရ၊ အိမ်မှာ ကလူမပြတ်၊
ပူစူးမလဲ အိမ်ရောက်လာလိုက်၊ အခွင့်အရေးကိုချောင်းလိုက်နဲ့ အခွင့်အရေးကမရ၊ တနေ့ထက်တနေ့ ပူစူးမ နှင့်လိုးကြည့်ချင်စိတ်တွေက ပြင်းပြလာသည်။ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့်လိုဘဲဟုထင်ပါသည်၊ တခါတရံ လစ်ရင်လစ်သလိုကျွန်တော့်အနားကပ်လာပြီး ကျွန်တော့်လီးကို မထိတထိလေးပွတ်ကာ ချစ်မျက်စောင်းလေးထိုးသွားသေး
သည်၊ အင်း ဒီကောင်မလေးတော့ ကျွန်တော့်လီးကို ကစားစရာများမှတ်နေသလားမသိ၊ တွေ့မှသိမယ်၊ စိတ်ထဲမှ
ဖြစ်ချင်တော့ မေမေတို့နှင့်အရမ်းခင်တဲ့ သူတဦး ရုတ်တရက်ဆုံးသည်၊ မေမေတို့ အလုပ်ပေါ်လာသည်၊ မေမေတို့
ကတမျိုး ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆို ကိုယ်ဖိရင်ဖိကူညီတတ်သည်၊ ဒီတော့ကျွန်တော့်အတွက် အခွင့်အရေးကရလာပြန်
သည်။ ပူစူးမ ကလဲ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ချောင်းနေသည်မသိ၊ မေမေတို့ ထွက်သွားတာနဲ့ ပေါက်ချလာသည်။
လာ .. ပူစူးမ .. အကိုလေးတောင် ပူစူးမကို လှမ်းခေါ်တော့မလို့ .. ဒီနေ့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး ..
ပူစူးသိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ချက်ခြင်းလာခဲ့တာ .. ပူစူးက အကိုလေးကို လွမ်းလှပြီ ..
အကိုလေးလဲ ပူစူးကို လွမ်းတာပါဘဲကွာ .. ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာ ကလူမပြတ်ဘူးလေ ...
ကျွန်တော့်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သော ပူစူးမကို အသာလှမ်းဖက်ရင်းက ပြန်ပြောလိုက်သည်၊
ပူစူးမတော့ အကိုလေးကို လွမ်းတာနဲ့ အကိုလေး လုပ်ပေးသလိုမျိုး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ခဏခဏ လုပ်မိတယ်
အကိုလေး လုပ်ပေးသလောက်မကောင်းပါဘူး .. ပြီးတော့ အကိုလေး ဟာကြီးကိုလဲ ကိုင်မထားရတော့
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောချလိုက်တဲ့ ပူစူးမစကားကို ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျသွားမိပါသည်။
ဒါနဲ့ .. အကိုလေး ပေးတဲ့ စာအုပ် ကြည့်ပြီးပြီလား
အင်း ပြီးပြီ .. ဓါတ်ပုံတွေကလဲ မရွံမရှာ စုတ်နေ ရက်နေလိုက်ကြတာ .. အဲဒါတွေဟာ တကယ်လား အကိုလေး
တကယ်မို့လို့ တကယ်ရိုက်ထားတာပေါ့ ..
ဟင်း .. သူတို့မို့ မရွံမရှာ ..
ဘာ ရွံစရာရှိလို့လဲ ပူစူးမရ .. သေသေချာချာရေစင်အောင်ဆေးထားရင် သန့်နေတာဘဲဥစ္စာ .. ဒီနေ့တောင်
အကိုလေး က ပူစူးမကို အဲဒီလိုမျိုးနမ်းပေးမလို့ ..
ပူစူမ နို့အစုံကို အင်္ကျီပေါ်မှ ဆုတ်နယ်ရင်း ပြောလိုက်သည်။
ကောင်းပါ့မလား အကိုလေးရာ .. တော်ကြာ ပူစူးမ ငရဲကြီးနေအုံးမယ် ..
ဘာမှငရဲကြီးစရာမရှိဘူး ပူစူးမ .. ဘယ်ဘုရားမှ သူများတွေဘယ်လိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ လာမကြည့်ဘူး ..
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ အကြောက်ပြေအောင် ခပ်နောက်နောက်လေးပြောလိုက်သည်။
ဒါနဲ့ ပူစူးမ က ရေသေသေချာချာဆေးထားရဲ့လား ..
အာ အကိုလေးကလဲ .. လူကိုသေသေချာချာ ကြည့်ပါအုံး .. အခုမှ ရေသေသေချာချာ ချိုးလာတဲ့ဟာ ..
ဟုတ်သည်၊ ပူစူးမ ဆံပင်တွေတောင် ရေကောင်းစွာမခြောက်သေး၊ ပြီးတော့ ရေချိုးပြီးမဆွတ်စဖူး
ရေမွှေးဆွတ်လာပုံရသည်၊ ရေမွှေးနံသင်းသင်းလေးနှင့်၊ နှုတ်ခမ်းနီပါးပါးလေးနှင့် ဒီကောင်မလေးတော့
ဟား ဟုတ်သားဘဲ .. အခုမှသတိထားမိတယ် .. ပူစူးမ ကဒီနေ့ တယ်မွှေးပြီး တယ်လှနေပါလား
ဘာ အခုမှသတိထားမိတာလဲ .. ဒီက အကိုလေးအတွက် ပြင်လာခဲ့တာ .. သူကအခုမှသိတယ် ..
ဆောရီးဘဲ ပူစူးမရာ .. အကိုလေးက ပူစူးမကို ဘယ်လိုချစ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေလို့ ရုတ်တရက်သတိမ
ကဲ စဉ်းစားမနေနဲ့ .. ဒီနေရာကြီးမှာ မကောင်းပါဘူး .. လာ အကိုလေး အခန်းထဲသွားမယ် ...
နို့ကို ဆုတ်နယ်နေသော ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကာ ထရပ်လိုက်ပါသည်၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ခုတော့ သူက ဦးဆောင်သူ
ဖြစ်နေပါပေါ့လား၊ ကျွန်တော်လဲ သူ့နောက်ကထရပ်ရင်း ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာသို ဦးတည်လိုက်ပါသည်။
ဒါနဲ့ .. မေးရအုံးမယ် .. ပူစူးမ ရာသီက ဘယ်တုန်းကလာသွားတာလဲ ..
လာပြီးတာဖြင့် ၂ရက်လောက်တောင်ရှိပြီ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ အကိုလေး ..
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး .. ရာသီလာပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ လုပ်ရင် ခလေးမရနိုင်ဘူးလို့ အကိုလေး အသိ
ဆရာဝန်က ပြောဘူးလို့ပါ .. ပြီးတော့ ၃ပတ်ကျော်မှလုပ်ရင်လဲ ခလေးမရနိုင်ဘူးတဲ့ ..
ဒါဆို .. ဒီနေ့ပူစူးတို့လုပ်ရင် ခလေးမရနိုင်ဘူးပေါ့ .. ပူစူးကစိတ်ပူနေတာ .. အကိုလေးနဲ့ လုပ်တာက
အရေးမကြီးဘူး .. တော်ကြာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် ဒုက္ခလို့ ..
အင်း ဟုတ်တယ် .. အကိုလေးလဲ ဒါကိုဘဲ စုိး ရိမ်တာ .. အခုတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ..
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော့်အခန်းဝသို့ရောက်လာပါတယ်၊ အခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်ကာ တံခါးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ
သည်၊ ကုတင်နားသို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ၊ ပူစူးမကိုဆွဲဖက်ကာ အင်္ကျီနောက်ကျောကကြယ်သီများကို အလျှင်စ
လိုဘဲ ဖြုတ်လိုက်ပါသည်၊ တဆက်တည်းမှာဘဲ ဘော်လီအင်္ကျီချိတ်ကိုလဲဖြုတ်လိုက်ပါသည်၊ ပြီးတော့ အင်္ကျီရော
ဖြေးဖြေးချွတ်ပါ အကိုလေးရာ .. ပူစူးထွက်မပြေးပါဘူး ..
ဟုပြောရင်း ပူစူးမလဲ အားကျမခံ ကျွန်တော့်စွပ်ကျယ်ကို ပင့်တင်ချွတ်နေပါသည်၊ ကျွန်တော်က
အကိုလေး မအောင့်နိုင်တော့ဘူး .. ပူစူးမကိုချစ်ချင်ပြီ .. စောင့်နေရတာ ကြာလှပြီ ..
ဟင်း အခုမှ လာလောမနေနဲ့ စောစောကဖြင့် အောက်မှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေပြီး ..
ကျွန်တော့် စွပ်ကျယ်ကျွတ်သွားတော့ စွပ်ကျယ်ကိုပူစူးမကကုတင်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါသည်၊ ပြီး ကျွန်တော်က
ပူစူးမထမီလေးကို ဖြေချလိုက်ပါသည်၊ ထမီက ကွင်းလိုက် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပုံကျသွားပါသည်၊ ပြီးတော့
ပူစူးမကို ကုတင်ပေါ်တွင် အသာဆွဲထိုင်စေပြီး ကျွန်တော်က ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ အတွင်းခံ
ဘောင်းဘီကို အသာဆွဲယူချွတ်လိုက်ပါသည်၊ ပူစူးမက အလိုက်သင့် တင်ပါးလေး ကြွပေးပါသည်၊ ဘောင်းဘီ
ကျွတ်သွားသော အခါမှာတော့ ဆီးစပ်တ၀ိုက် ပေါက်ခါစ အမွေးနုနု လေးများ အောက်မှ ဖြူဖွေးဝင်းနုဖေါင်းကြွ
နေသော ပူစူးမ၏အပျိုစင်စောက်ဖုတ်နုနုထွဋ်ထွဋ်လေးကို ကျွန်တော့်မျက်စေ့ရှေ့ မှာအနီးကပ်မြင်လိုက်ရပါသည်၊
ကျွန်တော်လဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ထိုက်ရင်း ပူစူးမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း ပေါင်းနှစ်လုံးကို
အသာဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးဟာ ဟသွားပြီး အတွင်းက ပန်းနုရောင်စောက်စေ့
လေးဟာ အနည်းငယ်ပြူထွက်လာပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲစိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ပူစူးမကိုယ်လေးကို အိပ်ယာ
ပေါ်အသာတွန်းချလိုက်ပါသည်၊ ပူစူးမ ဟာ ကိုယ်တပိုင်းက ကုတင်ပေါ်မှာ တင်ပါးက ကုတင်စောင်းပေါ်မှာ နဲ့
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ကုတင်အောက်ကို တွဲလောင်းကျလျှက် စောက်ဖုတ်ဟာ ပိုပြီးကြွလာပါသည်၊
ကျွန်တော်လဲ ဖြဲထားတဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြား ဒူးထောက်အသာတိုးပြီး လက်က နို့နှစ်လုံးကိုဖမ်းကိုင်ကာ ပူစူးမ
၀မ်းဗိုက်သား ဖြူဖြူလေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်ပါသည်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖွဖွလေးနမ်းတဲ့ အနမ်းကြောင့် ပူစူးမလဲ
ကိုယ်ကလေးတချက်တွန့်ကာ ကျွန်တော့် ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပါ သည်။
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ ဗိုက်တလျှောက် နေရာ အနှံ့ နှုတ်ခမ်းနှင့် ပွတ်သတ်ပေးရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ အောက်သို့ဆင်း
လာပါသည်၊ လက်ကလဲ နို့အုံတင်မက ခန္တာကိုယ်အနှံ့ ပွတ်သတ်ပေးနေပါသည်။ တဖြေးဖြေး အောက်ဖက်ဆင်း
လာတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဟာ ဆီးခုံစပ်အရောက်မှာတော့ ဆီးခုံစပ်ပေါ်က အမွေးနုနုများကို နှာခေါင်းဖြင့်
ပွတ်သတ်ကစားနေပါတော့သည်၊ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ခေါင်းရွှေ့ရာနောက်ကိုလိုက်
ရင်းသူ့တင်ပါးကို ကော့၍ကော့၍ပေးနေပါသည်၊ ခဏကြာတော့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ကာ ဟနေသော
အကွဲကြောင်းကြားက စောက်စေ့လေးကို လျှာဖြင့်အုပ်လိုက်ပါသည်၊ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကိုလဲ မိမိရရ ပူစူးမ
အိုး .. အင်း အင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း
ငြီးညူသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဟာ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို
ခွလာပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ဖိကပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကို လက်လွှတ်မခံဘဲ စောက်စေ့လေး
ကို လျှာဖြင့်ရက်လိုက် စုတ်ယူလိုက် အကွဲကြောင်းတလျှောက် ကျွန်တော့်လျှာကို စုန်ဆန် ရက်လိုက်နဲ့ မနားတမ်း
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ညှပ်ကာ ကျွန်တော်ရက်သမျှ ကော့၍
ကော့၍တမျိုး ဘယ်ညာ လူးလှိမ့်၍တဖုံ ကာမစည်းစိမ်ကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားနေပါသည်။ ပါးစပ်မှလည်း
တ ဟင်း ဟင်း တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ အော်မြည်ငြီးတွားနေပါတော့သည်၊ ကျွန်တော်လဲ သူဖီလင်တက်သမျှ
စိတ်တက်ကြွလာကာ သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကိုင်၍မနားတမ်းရက်ပေးနေရင်း လက်တဖက်က ကျွန်တော့်မေးစိနှင့်
ကပ်နေသော သူ့စောက်ခေါင်းအတွင်း ကျွန်တော့်လက်ခလည်ကို အသာထိုးထဲ့ဘို့ကြိုးစားနေပါသည်။
စောက်စေ့ကို ရက်၍တမျိုး စုတ်၍တဖုံ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်တလျှောက် စုန်ဆန်ရက်၍ အရည်ရွှဲနေသော
စောက်ခေါင်းတလျှောက် တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျွန်တော့်လက်ခလည်ကို ထိုးသွင်းနေပါသည်၊ တ၀က်ကျော်ကျော်
လောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို သူ့စောက်ဖုတ်မှ အသာခွာ၍ ကျွန်တော့်လက်ကို
စောက်ခေါင်းအတွင်း မွှေကစားနေပါသည်၊ ကစားနေရင်းမှ ကျွန်တော့်လက်ကို နဲနဲချင်း အဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက်
ပါသည်၊ လက်မကလဲ စောက်စေ့ကိုဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ လက်က ပူစူးမစောက်ဖုတ်ထဲ
ထည့်ထားပြီး လုံချည်ကိုဂွင်းလုံး ချွတ်ချရင်း အသာထကာ ခုတင်ပေါ်ထိုင်လိုက်ပါသည်၊ ပြီး ပူစူးမကိုယ်ကို
အသာခွကာ ကျွန်တော်လီး ကို ပူစူးမ ကိုယ်ပေါ်မှ အသာပွတ်ဆွဲရင်း မျက်နှာနားသို့ကပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်က ပူစူးမကိုယ်ပေါ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် အနေအထားမှောက်ရက်ရှိနေပါသည်၊ ကျွန်တော့်
ခေါင်းကပူစူးမ ပေါင်ရင်းလောက်မှာရောက်နေပြီး ကျွန်တော့်လက်က ပူစူးမ စောက်ဖုတ်နှင့်အလုပ်များနေပါ
သည်၊ ကျွန်တော့် လီးက ပူစူးမ မျက်နှာပေါ်ရောက်နေပြီး ပူစူးမ က သူ့မျက်နှာရှေ့ရောက်လာသော ကျွန်တော့်
လီးကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဒစ်ဖျားလေးကို အသာ သူ့ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပါသည်။ ပါးစပ်ထဲဝင်လာသော
ဒစ်ဖျားကို အသာစုတ်ယူနေပါသည်၊ လီးအရင်းပိုင်းကို ကိုင်ထားသော လက်ကိုလွှတ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်
ကျွန်တော့် ဥနှစ်လုံးကို ပွတ်ကစားနေပါသည်၊ ပါးစပ်တွင်းမှလီးထိပ်ဖျားလေးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ပွတ်၍လည်း
ကောင်း၊ ဒစ်ပတ်ပတ်လည်တလျှောက် လျှာဖြင့် ပွတ်၍လည်းကောင်း၊ လိင်တံကိုတင်းတင်းဆုတ်ကာ စုတ်အား
ခပ်ပြင်းပြင်းဖြင့်စုတ်၍လည်းကောင်း၊ လိင်တံကိုပါးစပ်မှထုတ်ပြီး လိင်တံတလျှောက် လျှာဖြင့် အထက်အောက်
စုန်ဆန်ပွတ်ဆွဲ၍ တမျိုး၊ လက်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဂွင်းတိုက်၍တဖုံ၊ ကျွန်တော်ပေးသော စာအုပ်ထဲမှ နည်း
ပေါင်းစုံသာမက သူလုပ်ချင်သလိုလုပ်ကာ ကျွန်တော့်လိင်တံသာမက ဥကိုပါမကျန် ကစားနေပါသည်။
ကျွန်တော်လဲ အရသာ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်လာကာ သူ့စောက်ဖုတ်ကို လက်ဖြင့်သာမက လျှာနဲ့ပါ ရက်စုပ်
ဒီလို တယောက်ကိုတယောက် အပြန်အလှန် ရက်စုတ်ကစားရင်း အတော်လေးကြာတော့
လုပ် လုပ် ပူစူး ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ် ... အကိုလေးပြီးတော့မယ် ...
ပူစူးလဲ ကျွန်တော့်လီးကို ပါးစပ်တွင်းမှ ဆွဲထုတ်ပြီး လက်ဖြင့် ခပ်သွက်သွက်လေး အထက်အောက် စုန်ဆန်ပွတ်္ဖ
ဆွဲ ဂွင်းတိုက်ပေးနေပါသည်၊ သူလဲ အကြောချင်များတင်းကာ တင်ပါးမှာလဲ ကော့သထက်ကော့လာပါသည်၊
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမကိုယ်ပေါ်ကို သုတ်ရည်များပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့သည်၊ ပူစူးမလဲ
ခဏကြာမျှပူစူးမ ကိုယ်ပေါ်ထက်ရက်မှိန်းနေပြီးမှ ဘေးသို လှိမ့်ချကာ ပူစူးမဘေး လှည့်ကာ
ဟား .. ပူစူးမစုတ်ပေးတာ တော်တော်ကောင်းတာဘဲ ..
ဟုတ်လား ပူစူးလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာလုပ်လို့ ဘာလုပ်မှန်းလဲ မသိပါဘူး .. အကိုလေးပေးတဲ့ စာအုပ်ထဲက
အတိုင်းလို့ထင်တာဘဲ .. ပူစူးလဲ အကိုလေးရက်ပေးတာ အတော်ခံလို့ကောင်းတာဘဲ .. ပထမ တစ်ခါက
ထက်တောင်ကောင်းသေးတယ် .. ပထမတစ်ရက်က လက်နဲ့ဘဲလုပ်တဲ့ဟာ ကိုးနော့ ..
ပူစူးမက သူ့ကိုယ်မှာပေနေသော သုတ်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်စွပ်ကျယ်နဲ့သုတ်ရင်း ပြောသည်။
ဒါတောင်ပူစူးမကို အကိုလေးက မလိုးရသေးဘူး ... ပူစူးမ ခံနိုင်သေးရဲ့လား ..
ခံနိုင်တာပေါ့ အကိုလေးရာ .. ပူစူးမက အကိုလေးနဲ့ အဲဒီလိုမျိုး တနေ့လုံးနေချင်တာ ... အကိုလေးကရော
လုပ်နိုင်တာပေါ့ .. ဟောဒီအကိုလေး လီးတောင်နေသ၍ လုပ်နိုင်တာပေါ့ ..
ဟင် .. အခု ထောင်မှမထောင်နေတာ ..
ပျော့နေသော ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကြည့်ရင်းပူစူးမကပြန်ပြောသည်။
အခုက ပထမ တချီပြီးထားလို့ အနားယူနေတာပါ .. ခဏနေရင်ပြန်ထောင်လာလိမ့်မယ် .. မယုံရင်ကြည့်နေ ..
ကျွန်တော်က အပျိုနုနုထွဋ်ထွဋ် အသားအရည် နူးညံ့အိနွေးနေသော ပူစူးမတစ်ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သတ်ရင်း
ပြန်ပြောလိုက်သည်၊ ပွတ်သတ်ရင်းလက်က ပေါင်ကြားရောက်သွားကာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်
လက်ခလည်နှစ်ကာ တဖြေးဖြေးပွတ်ဆွဲနေမိသည်၊ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့်လိင်တံကို ကိုင်ထားရင်း ဆော့ကစားနေ
တော့ ခဏအတွင်းမှာဘဲ ပြန်ထောင်လာပါသည်။ ဒီလို တယောက်ကိုတယောက် ပွတ်ကစားလိုက်တော့ ပူစူးမလဲ
သူ့စောက်ခေါင်းအတွင်း အရည်တွေရွှဲလာကာ ကျွန်တော့်လိင်တံလည်း အသားကုန်ပြန်လည်တင်းမာလာပါတော့
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ ခြေထောက်နှစ်ချောင်ကို ဆွဲယူေ`မှာက်လိုက်ပြီး ခြေထောက်ကြားဝင် ဒူးထောက်ကာ ပူစူးမ
ခြေထောက်၂ချောင်းကို ဖြဲလိုက်ပါသည်၊ ခြေထောက်၂ချောင်းပြဲသွားတော့ စောက်ခေါင်းဟာလဲ မပွင့်တပွင့်လေး
ဟလာပါသည်၊ ဟလာသော စောက်ခေါင်းအ၀ ဒစ်ကိုအသာတေ့၍ အကွဲကြောင်းတလျှောက် အထက်အောက်
ပွတ်ပေးနေပါသည်၊ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော်လုပ်သမျှအသာကြည့်နေပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ လက်ကိုလှမ်းဆွဲ
၍ သူ့ပေါင်နှစ်ဘက်အား တစ်ဖက်စီ တင်းတင်းဆွဲကားထားခိုင်းလိုက်ပါသည်၊ ဒီတော့ ပေါင်က ပိုပြဲလာပြီး
စောက်ခေါင်းလဲ ပိုဟလာပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကာ အကွဲကြောင်းတလျှောက်ပွတ်ဆွဲနေ
ရင်းမှ တချက်မှာတော့ စောက်ခေါင်းထဲ ခပ်ဖိဖိလေး နှစ်ထဲ့လိုက်ပါသည်၊ အရည်ရွှဲနေသော စောက်ခေါင်းတွင်း
ကျွန်တော့် ဒစ်အဖျားပိုင်းလေးဝင်သွားပါသည်။ ပူစူးမလဲ
အို့ .. ဟုအသံတချက်ထွက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို သွားဖြင့် ဖွဖွလေးကိုက်ထားပါသည်၊
ဒစ်ဖျားကို စောက်ခေါင်းတွင်းမှ ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ၁၄-၅ ကြိမ်လောက်ကစားလိုက်တော့
စောက်ခေါင်းထဲ အရည် ရွှဲသထက်ရွှဲလာပါသည်၊ ဒီလိုကစားရင်း တချက်မှာတော့ အနည်းငယ်ပိုပြီး အားစိုက်
အိုး .. အော်သံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်လီးဟာလဲ တလက်မနီးပါးမျှ ပိုဝင်သွားပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ ဆက်မသွင်း
တော့ဘဲ စောစောကအတိုင်း ၀င်သလောက်ကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် ကစားပေးနေပါသည်၊ ပူစူးမ လဲ သူ့
ပေါင်ကို ပြဲနိုင်သမျှပြဲအောင်ဆွဲဖြဲပေးရင်း နာကျင်မှု့ကို ကျိတ်မှိတ်ခံနေဟန်တူပါသည်။
နာလား ပူစူးမ ...
အင်း .. အောင့်လိုလို နာသလိုလိုနဲ့ .. ပူစူးခံနိုင်ပါတယ် ..
တအားနာရင်ပြောနော် .. ပူစူးမကို သတိပေးရင်း နောက်တစ်ကြိမ် ဖိသွင်းလိုက်ပြန်ပါသည်။
အား .. နာတယ် ..
တစ်ဝက်နီးပါးမျှဝင်သွားတော့ နာတယ်ဟု အသံထွက်လာပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ဆက်မသွင်းတော့ဘဲ ရပ်ထား
ကာ ၀င်သလောက်ကိုဘဲ စကောဝိုင်းလှည့်သလို ကျွန်တော့်လီးကို ပူစူးမစောက်ဖုတ်အတွင်း မွှေကစားနေပါ
သည်၊ ကျွန်တော့်လီးလဲ ပူစူးမစောက်ခေါင်းအတွင်း ကြပ်ကြပ်ညှပ်ညှပ်ကြီးဖြစ်နေပါသည်၊ ခဏတာမျှမွှေကစား
လိုက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အနည်းငယ်ချောင်ချိသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါသည်၊ ဒီတော့ အသာပြန်ဆွဲထုတ်
ပြီး ဖြေးဖြေးလေးဖိပြီး ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်ပါသည်၊
အား .. နာတယ် နာတယ် အကိုလေး ..
နဂိုနေရာအရောက်မှာတော့ ပူစူးမဆီမ အသံထွက်လာပြန်သည်၊ ဒီလိုနဲ့ ၄-၅ ကြိမ်လောက် အထုတ်အသွင်းလုပ်
လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ပူစူးမဆီက နာတယ်လို့ အော်သံပျောက်သွားပါသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ရပ်မနေဘဲ
အထုတ်အသွင်းကို ဆက်တိုက်လုပ်နေပါသည်၊ လုပ်ရင်း လုပ်ရင်း နဲ့ လုပ်ရတာ တဖြေးဖြေးချောမွတ်လာပါ
သည်၊ အဲဒီတော့ တကြိမ် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဖိထည့်လိုက်ပြန်ပါသည်၊
အား .. အမလေး နာတယ် နာတယ် အကိုလေး .. အမလေး နာလိုက်တာ ...
ဒီတကြိမ်တတော့ တော်တော်နာသွားပုံရသည်၊ ကျွန်တော့်လီးလဲ ၃ပုံ၂ပုံ လောက်ဝင်သွားသည်ဟုထင်ရသည်၊
ကျွန်တော်လဲ ပြန်ဆွဲမထုတ်ဘဲ ၀င်လက်စနဲ့ အသာလေးရပ်ကာ ပူစူးမ အာရုံပြောင်းအောင် စောက်စေ့လေးကို
ပွတ်ကစားပေးနေတော့သည်။ အတော်လေး ကြာတော့ သူလဲ ခံနိုင်ရည်ရှိလာဟန်တူသည်၊ မျက်နှာလေး ရှုံမဲ့နေ
အဆုံးထိဝင်သွားပြီလား အကိုလေး .. ဟုလှမ်းမေးသည်၊
မ၀င်သေးဘူး ပူစူး .. နဲနဲကျန်သေးတယ် .. ဒီမှာကိုင်ကြည့် .. ဟုဆိုကာ ပူစူးမ လက်ကိုဆွဲပြီး ကိုင်ခိုင်းလိုက်
သည်၊ ပူစူးမလဲ အသာစမ်းကြည့်ပြီး လက်ထောက်ခေါင်းထောင်ကြည့်ကာ
အား အများကြီး ကျန်သေးတာဘဲ .. တော်ပြီ တော်ပြီ ပူစူးမ မခံနိုင်တော့ဘူး .. နာလိုက်တာ .. တော်ပြီနော်
ပူစူမရယ် .. ပထမအကြိမ်ဆိုတော့ ဒီလိုဘဲ နဲနဲတော့ နာတာပေါ့ .. ခဏနေမနာတော့ပါဘူး .. အောင့်ခံလိုက်
နော် .. အကိုလေး ပွတ်ပေးမယ် ဟုတ်လား ..
ပြောပြောဆိုဆို ပူစူမ စောက်စေ့လေးကို ကြမ်းကြမ်းလေးပွတ်ပေးနေပါသည်၊ ပူစူးမလဲ နာနေရာက စောက်စေ့ကို
အပွတ်ခံနေရ၍စိတ်ပြောင်းကာ ဖီလင်တက်လာပြန်သည်၊ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ ဖီလင်တက်လာတာ တွေ့ရတော့
၀င်နေသောလီးကို အသာ ဆွဲနှုတ်ယူလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ လီးတွင် သွေးစ အနည်းငယ် ကပ်ပါလာတာကိုတွေ့
ရလိုက်ပါသည်၊ ဧကန္တ ပူစူးမ အပျိုအေ`မှးပါး ပေါက်သွားတာဖြစ်မယ်၊ ဒါကြောင့် သူဒီလောက်နာတာကိုး၊
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမကို သွေးထွက်သွားကြောင်းပြောမနေတော့ဘဲ ထုံးစံအတိုင်း အထုတ်အသွင်းကို တဖြေးဖြေး
ပြန်လုပ်နေပါသည်၊ ဒီတခါတော့ ပူစူးမလဲ တော်တော်ခံနိုင်ရည်ရှိလာပုံရသည်၊ နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ကာ ကျိတ်
ခံနေသည်၊ ကျနော်လဲ လုပ်ရင်းနဲ့ အတော် ချောမွေ့လာပြီဟု ထင်ရတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖိထည့်
လိုက်ပါသည်၊ ဒီတခါတော့ အဆုံးထိ ရွှတ်ကနဲဝင်သွားပါသည်၊ ပူစူးမလဲ မှေးစင်းနေသော မျက်လုံး ဖျတ်ကနဲ
အို့ .. ဟုအော်ရင်း
အကိုလေး .. ဗိုက်ထဲက အောင့်တယ် အကိုလေး ..
တော်တော်အောင့်လား .. ပူစူမ
အင်း .. နဲနဲအောင့်သလိုလို .. နာသလိုလိုနဲ့ ..
ကိစ္စမရှိဘူး ပူစူးမ .. သားအိမ်ကို သွားထောက်မိလို့နဲ့တူတယ် .. ခဏနေပျောက်သွားလိမ့်မယ် ..
ကျွန်တော့ လိင်တံက ရှည်လဲရှည် တုတ်လဲတုတ်တာမို့ သားအိမ်ကိုသွားထောက်မိတာဘဲဖြစ်နိုင်သည်၊ လိင်တံ
တချောင်းလုံးလဲ ပူစူးမ စောက်ခေါင်းအတွင်း ကြပ်ညှပ်လို့နေသည်၊ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ ကိုယ်ပေါ်လှဲချကာ
ပူစူးမ ခြေထောက် ၂ချောင်းကို ကျွန်တော့်ခါးတွင် ချိတ်ထားစေလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်လက် ၂ဖက်ကလဲ ပူစူးမ
ကိုယ်ကို သိုင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို စုတ်ယူလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးကလဲ စကောဝိုင်းပုံလှည့်ကာ
ကျွန်တော့်လိင်တံကို ပူစူးမ စောက်ဖုတ်အတွင်း ကလိနေတော့သည်၊ ခဏနေတော့ ပူစူးမလဲ အရသာတွေ့လာပုံရ
သည်၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဖက်တွယ်ရင်း ကော့ကော့ပေးနေတော့သည်။
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ အရသာတွေ့နေတော့ ကျွန်တော့်လီးကို အသာ တ၀က်လောက်ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်ဖိထည့်
လိုက်၊ စကောဝိုင်း မွှေပေးလိုက် နဲ့ ဖြေးဖြေးညင်သာစွာ သွေးတိုးစမ်း နေပါသည်၊ ခဏကြာတော့
ပူစူးမ နာသေးလား ..
ဟင်အင်း သိပ်မနာတော့ဘူး .. ကောင်းသလိုလို အောင့်သလိုလိုနဲ့ ..
ဒါဆို အကိုလေး နဲနဲ စမ်းဆောင့်ကြည့်မယ်နော် ..
အင်း .. ဖြေးဖြေးနော် အကိုလေး ..
အင်းပါ .. ပြန်ဖြေရင်း လီးကိုတ၀က်ကျော်ကျော်လောက်ဆွဲထုတ်ကာ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဖိထည့်လိုက်ကြည့်ပါ
အင့် .. နာတယ် .. အကိုလေး ..
ဒါဆို အကိုလေး မဆောင့်တော့ဘူး .. ဒီလိုဘဲ ဖြေးဖြေးလေးလုပ်တော့မယ် .. ဟုဆိုကာ လီးကို အသာလေး
ဆွဲထုတ်လိုက် အညင်သာဆုံးပြန်ထည့်လိုက်၊ စကောဝိုင်း လှည့်ပေးလိုက် နဲ့ တလှည့်စီ လုပ်ပေးနေပါသည်၊
ပူစူးမလဲ ဖီလင်အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်လာကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို အတင်းသိုင်းဖက်ပြီး အောက်မှ ကော့၍
ကော့၍ပေးနေတော့သည်၊ ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမ ကော့ပေးနေတာကတကြောင်း ပူစူးမ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ
ညှစ်အားတို့ကြောင့်တကြောင်း တို့ကြောင့် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှာဘဲ သုတ်ရည်များပန်း
ထုတ်ကာ ပူစူမကိုယ်ပေါ် မှောက်ကျသွားပါတော့သည်။
အတော်လေးကြာအောင် ပူစူးမကိုယ်ပေါ်မှိန်းနေပြီးနောက် ဘေးသို့ အသာလှဲချကာ
ဘယ်လိုလဲ ပူစူးမ .. ကောင်းလားဟင် ..
ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ နာတယ် .. နာတော့ ကောင်းတာတွေပျောက်ကုန်တယ် ..
ဒါက အကျင့်မရှိသေးလို့ပါ .. တစ်ရက် နှစ်ရက်ဆက်လုပ်လိုက်ရင် မနာတော့ပါဘူး ..
ပူစူးမလဲ ဒီလိုဘဲထင်ပါတယ် .. ဒီရက်အတွင်း ကြီးမေတို့က အသုဘအိမ်သွားကြမှာဆိုတော့ ပူစူးမတို့
ဒါပေါ့ .. ပူစူးမရ ..
ပူစူးမကတော့ အကိုလေး ရက်ပေးတာကို ပိုကြိုက်တယ် .. သိလား ..
အမလေး ပူစူးမရယ် .. အခုက ပူစူးက နာနေလို့ပါ .. နောက်ကျင့်သားရသွားရင် အရသာပိုကြိုက်သွားမယ် ..
အခုက အကိုလေးက ပူစူးမကို ညှာနေလို့ စိတ်ရှိတိုင်း မဆောင့်နိုင်လို့ပါ .. နောက် မနာတော့ရင် .. အကိုလေး
ဆောင့်တိုင်း တချက်ဆို တချက် ပူစူးမ သိသိသာသာ အရသာ တွေ့သွားမယ် .. သိလား ..
ဟုတ်လား အကိုလေး .. ဒါဆို မနက်ဖြန်မှထပ်လုပ်ကြတာပေါ့ .. အခုတော့ ပူစူးမ စောက်ဖုတ်တခုလုံးလဲ
ကျိန်းနေပြီ .. အတွင်းက နဲနဲလဲ နာနေသေးတယ် .. စိတ်ထဲကတော့ ထပ်လုပ်ချင်သေးတယ် အကိုလေးရာ ..
အင်း .. အချိန်တွေရှိပါသေးတယ် .. မေမေတို့လဲ ညနေစောင်းလောက်မှပြန်လာမယ်ထင်တယ် .. နာတာကတော့
ခဏ အနားယူလိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ်ထင်တယ် .. အကိုလေးလဲ ဗိုက်ဆာပြီ .. အောက်ဆင်းပြီးတခုခု
သွားစားရင်ကောင်းမယ် .. အားရှိမှ လုပ်နိုင်မယ် ..
ဟာ .. အကိုလေးကတော့လေ ... တကယ်ဘဲ ..
ဘာလဲ .. အကိုလေးပြောတာ မဟုတ်လို့လား ..
ဟုတ်ပါတယ် .. ဟုတ်ပါတယ် .. အကိုလေး သဘောပါဘဲတဲ့ရှင် ..
ဒါဆို .. လာ ထ .. သွားမယ် ..
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လဲ အ၀တ်အစားများပြန်ကောက်ဝတ်ကာ အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့ကြပါတော့သည်။
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထပ်မလိုးဖြစ်ပေမဲ့ တယောက်နဲ့တယောက်စုတ်တာ နမ်းတာ တော့ဆက်ဖြစ်ခဲ့
ကြပါသေးတယ်၊ အဲထူးခြားတာတခုကတော့ ..
ကျွန်တော်က ကုတင်ဘောင်တွင်မှီထိုင်ရင်း ပူစူးမ ကကျွန်တော့်ပေါင်ကြားတွင်ဝမ်းလျှားမှောက်ကာ ကျွန်တော့်
လီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် စုတ်ရက်ကစားနေသည်ကို အရသာခံကြည့်ရင်း
ပူစူးမ .. ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်သည်၊
ဟင် ... ပါးစပ်ထဲမှ လီးကိုဆွဲမထုတ်ဘဲ ပြန်ထူးလိုက်သည်၊
ဒီတခါ အကိုလေးပီးရင် .. ပူစူးပါးစပ်ထဲမှာဘဲ ပီးချင်တယ် ..
ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်ရင်း
ဟာ .. အကိုလေး သုတ်ရည်တွေ ပူစူးပါးစပ်ထဲဝင်ကုန်မှာပေါ့ ..
၀င်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ပူစူးမရ .. သုတ်ရည်တွေဘဲ .. မြိုချလိုက်ပေါ့ ..
အကိုလေးကလဲ .. ရွံ့စရာကြီး ..
ဘာရွံ့စရာရှိလို့လဲ .. ပူစူးမ ကိုအကိုလေး ရက်ပေးတုန်းက ပူစူးမဆီက တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေတဲ့ အရည်တွေ
အကိုလေး မြိုချရတာဘဲဟာ .. အကိုလေးက ပူစူးမ ပါးစပ်ထဲမှာ ပီးသွားတဲ့ အရသာ ခံချင်လို့ပါ ..
ပူစူးမလဲ အကိုလေးပီးတာ ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲ အသဲယားစရာကြီး .. အကြောကြီးတွေထောင်တဆတ်ဆတ်
တုန်ပြီး အရည်တွေပန်းထွက်တာ မြင်ရတာ ပူစူးမလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပီးသွားသလို ခံစားရတယ် .. သိလား ..
ဒါဆို .. ဒီတခါပါးစပ်ထဲမှာ ပီးလိုက်မယ်နော် ..
သဘော သဘော .. ဘာမဆို အကိုလေး သဘောပါဘဲရှင် ..
ဆိုပြီး ကျွန်တော့်လီးကို ပါးစပ်ထဲ ပြန်ထဲ့ကာ ဆက်စုတ်နေတော့သည်၊
ကျွန်တော်လဲ ပူစူးမဆီက သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမို့ ပူစူးမခေါင်းလေးကိုကိုင်ကာ .. ကျွန်တော့်အလိုကျ
ထိန်းမတ်ပေးရင်း ကာမအရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားနေတော့သည်၊ တော်တော်လေးကြာတော့
စုတ်စုတ် ပူစူးမ .. ပြင်းပြင်းလေးစုတ် .. အကိုလေး ပီးခါနီးပြီ ..
ပူစူးမလဲ ကျွန်တော့လိင်တံကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဒစ်ထိပ်ကို ငုံ၍ အားရပါးရစုတ်နေတော့သည်၊ လက်ကလဲ
သွက်သွက်လေး ဂွင်းတိုက်ပေးလေတော့ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ အကြောကြီးတွေထောင်တဆတ်ဆတ်တုန်
ရင်း သုတ်ရည်များ ပူစူးမပါးစပ်ထဲ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်၊ သုတ်ရည်များကို ပူစူးမမျိုချရင်း ခဏတာမျှ
ကျွန်တော့်လီးကိုဆက်ငုံထားလေသည်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျွန်တော့်လီးပျော့ကျသွားတဲ့အခါကြမှ ပါးစပ်တွင်းမှ
ကဲ ကြေနပ်ပြီလား အကိုလေး ..
ကောင်းလိုက်တာ ပူစူးမရာ .. ပူစူးမကိုတော့ အကိုလေး စွဲသွားပြီ ..
အောင်မလေး .. ပူစူးမက အကိုလေးကို ပိုစွဲတာပါ .. ဒါကြောင့် အကိုလေး အလိုကျ အကုန်လုပ်ပေးတာပေါ့ ..
အကိုလေး လဲ ပူစူးမ အလိုကျအကုန်လုပ်ပေးတာဘာပါဘဲ .. ကဲကဲ ခဏအနားယူလိုက်ရအောင် ..
ပူစူးမနဲ့ကျွန်တော်လဲ အိပ်ယာပေါ်တွင် ခဏမှိန်းနေပြီး ညနေစောင်းတော့ ပူစူးမလဲ သူ့အိမ်သူပြန်သွားပါတော့
ဒီလိုနဲ့ ၃ရက်လောက်ဆက်ပြီးပူစူမနဲ့ နှစ်ပါးသွားလိုက်တာ ပူစူးမလဲ ကျွန်တော်ဆောင့်လိုးတဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်လာ
ပြီး အပေးအယူမျှကာ တက်ညီလက်ညီ ကာမစည်းစိမ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနိုင်လာပါတော့သည်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ လစ်ရင်လစ်သလို ပူစူးမနဲ့ ကျွန်တော်စခန်းလိုက်ကြသည်မှာ အချိန်ကာလ တော်တော်လေး
ပင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်၊ ပူစူးမလဲ ကာမစပ်ယှက် ရာတွင်ကျွန်တော့်နီးပါးကျွမ်းကျင်လာပါတော့သည်။
ကျွန်မဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုတော့သိပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်၊ ပူစူးမလေ၊ ကျွန်မအပျိုရည်ပျက်ခဲ့တာက ၁၅နှစ်
သမီးကတဲက၊ ဟုတ်တယ်၊ အကိုလေးနဲ့ပေါ့၊ ကျွန်မကလဲ ကျွန်မ ဒီကိစ္စမျိုးတွေစိတ်ဝင်စား ခဲ့တာ အပျိုဖေါ်ဝင်
စကတဲက၊ အဲဒီမှာ အကိုလေးနဲ့စတွေ့တာဘဲ၊ အကိုလေးဆိုတာက ကျွန်မတို့အိမ်နားက၊ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မ
၁၀တန်းစာမေးပွဲ ပြီးကာစ၊ အားနေတယ်လေ၊ သိတဲ့အတိုင်း အပျိုဖေါ်ဝင်စဆိုတော့ ဒီလိင်ဆက်ဆံမှု့ကို စစိတ်
၀င်စားတဲ့အချိန်ပေါ့၊ ကျွန်မကလဲတမျိုး ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးမနေဘူး၊ သူများကိုသွားမေးလို့ကလဲ မဖြစ်၊
အားလုံးက ကျွန်မကို ခလေးလို့ဘဲထင်နေတာ၊ အဲဒီမှာ အကိုလေးကို ကျွန်မသတိထားမိသွားတယ်၊ သူက
ကျွန်မ ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာ ရိပ်မိသွားတယ်၊ တခါတခါ ကျွန်မရဲ့ တင်တို့ ရင်တို့ ကို လှမ်းလှမ်းကြည့်
တဲ့ မျက်လုံးတွေထဲက ဆန္ဒကိုလဲ သဘောပေါက်သွားတယ်၊ ကျွန်မကလဲ စမ်းချင်တယ်၊ သူလဲ လိုချင်တယ်၊
ဟန်ကြပြီ၊ တခုဘဲလိုတယ် အကွက်မိဘို့၊ ကျွန်မက ခလေးလိုနေပေမဲ့ ဒီလောက်တော့ နားလည်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူဆင်တဲ့အကွက်ထဲ ကျွန်မလှမ်းဝင်လိုက်တယ်၊ အဲဒီနေ့က သူမဆင်လဲ ကျွန်မကတနည်းမဟုတ်
တနည်းနဲ့တော့ ဆင်မှာပါဘဲ၊ သူကဆင်လိုက်တော့ ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်။
မှတ်မိသေးတယ်၊ ဒါတောင်ပထမနေ့က သူဆင်တဲ့ အကွက်ထဲတိုးဝင်ဘို့ဟာ စိတ်ထဲကကြောက်လာတာနဲ့
ပြန်ပြေးသွားတာ၊ သိသားဘဲ သူတကယ်အိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာ၊ အိမ်ရောက်မှ ပြန်ပြေးလာတာ အမှားလို့
နောင်တရ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသေးတယ်၊ တော်သေးတယ် ဒုတိယနေ့မှာ အဆင်ပြေသွားလို့၊
ဒါတွေထားပါတော့လေ၊ ကြုံလို့ပြောပြတာပါ၊ အခုကျွန်မအသက် ၁၆နှစ်ကျော်ပြီ၊ ၁၀တန်းကိုလဲ ၂ခါကျပြီးပြီ၊
အကိုလေးနဲ့လဲ တော်တော်ကြာ ချစ်ခဲ့ပြီးလို့ အတွေ့အကြုံလဲတော်တော်ရပြီ၊ ဒါမျိုးဆိုတာကလဲ အခက်သား
ဆားငန်ရည်သောက်မိသလို သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ ဆိုတာမျိုး၊
အကိုလေးနဲ့လဲ အခုမတွေ့တာ အတော်ကြာပြီ၊ ၆လလောက်တောင်ရှိတော့မယ်၊ သူလဲ အလုပ်ရသွားတော့ အရင်
ကလောက် အချိန်ပိုမရှိတော့ဘူးလေ၊ သူရုံးအားတဲ့ရက်ဆို လူမလစ်တော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊ အပြင်မှာသွားလုပ်
ဖို့ကလဲ လူတွေသိကုန်မှာစိုးတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး၊ ကျွန်မကလဲ ကျွန်မ လုပ်ချင်တာဆို လုပ်ရမှ၊
ဒါနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လလောက်က စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရီးစားကောက်ထားလိုက်တယ်၊ အဆင်အပြေပါဘူး၊
အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့ပါရဲ့၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်တော့ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ၊ ပြီးတော့ ရီးစားက
ရွယ်တူလေးဆိုတော့ သူ့ဆီမှာ ဘာအတွေ့အကြုံမှလဲမရှိ၊ ကောင်းကောင်းလဲ မကိုင်တတ်၊ သူ့ကိုသင်ပေးလို့ကလဲ
မဖြစ်၊ သူလုပ်မှ မထိတထိနဲ့ ပိုဆိုးလာတယ်၊ အဲဒီဆိုးလာတဲ့ စိတ်ကို သူကလဲ ငြိမ်းအောင်မလုပ်တတ်၊
ဒါကြောင့် မထူးဘူးဆိုပြီး ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာ့ကို သတိထားမိသွားတယ်၊ ဆရာဆိုတာက ကျွန်မကျူရှင်ဆရာကိုပြောတာပါ၊ ကျွန်မက
၁၀တန်း ၂ခါကျထားတာဆိုတော့ ကျောင်းမတက်တော့ဘူးလေ၊ အပြင်မှာကျူရှင်သင်တယ်၊ သင်တာကလဲ
ကျောင်းချိန်မဟုတ်ဘူး၊ ကြားချိန်၊ အပြင်သမားတွေအတွက် သီးသန့်ဖွင့်ထားတာ၊ မနက် ၉နာရီကနေ ၁၁
နာရီထိ၊ ပြီးရင်ဆရာက တနေ့လုံး နားပြီး ညနေ ၄နာရီမှ အတန်းပြန်စတယ်၊ ဖွင့်ထားတာကလဲ မြို့လည်က
တိုက်ခန်းမှာ၊ ပထမထပ်ဆိုပါစို့၊ အရှေ့ပိုင်း တပိုင်းလုံးကို စာသင်ခန်းလုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာက သူနားဖို့ အိပ်ခန်း
သေးသေးလေးတခုရှိတယ်၊ နေတာကတော့ သူ့အိမ်မှာသူနေတယ်၊ ပြီးတော့ လူပျိုကြီးလို့ပြောတာဘဲ၊ ရရင့်နဲ့
ပြိုတာပါ၊ မိန်းမရှုတ်တယ်လို့ သတင်းက နဲနဲထွက်တယ်၊ အဲ စာသင်တာကတော့ကောင်းတယ်၊ အပြောလဲ
ကောင်းတယ်၊ သူစာသင်ရင် မပျင်းရဘူး၊ လွယ်လွယ်နဲ့မှတ်မိတတ်အောင်လဲ သင်တတ်တယ်၊
ကဲ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ဘဲ .. ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာတွေ မနက်ဖြန်ကျ စစ်မယ် ..
ဆရာလဲ သူ့သင်တာကို နိဂုံးချုတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခန်းထဲဝင်သွားတော့တယ်၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလဲ
စာအုပ်သိမ်းပြီး ထပြန်ကြတယ်၊ ကျွန်မလဲ အများနည်းတူ စာအုပ်သိမ်းသလိုလိုနဲ့ အချိန်ဆွဲနေလိုက်တယ်၊
အားလုံးကတော့ စာသင်ချိန်ပြီးတာနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် သူ့အဖွဲ့နဲ့သူ ထပြန်ကြတာပေါ့၊ ကျွန်မက
တယောက်ထဲလာတာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းမရှိဘူးလေ၊ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလဲ စာမေးပွဲ အောင်ကုန်ကြတော့
ခဏကြာတော့ ဆရာလဲ ကျောင်းသားတွေကုန်လောက်ပြီအထင်နဲ့ တံခါးပိတ်ဖို့ အရှေ့ကိုပြန်ထွက်လာတယ်၊
ပူစူးမ မပြန်သေးဘူးလား .. ဟုလှမ်းမေးသည်၊
စိတ်ညစ်တယ် ဆရာရယ် .. မပြန်ချင်သေးပါဘူး ..
ဘာများစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲ ပြောစမ်းပါအုံး .. ဟုဆိုကာ ကျွန်မရှေ့ စားပွဲပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်၊
မပြောချင်ပါဘူး ဆရာရယ် .. အိမ်ကလဲ စာမေးပွဲမအောင်တာဘဲ အပြစ်ပြောပြောနေတယ် ..
ဒါများဘာခက်တာမှတ်လို့လဲ ပူစူးမရယ် .. အောင် အောင်ဖြေပြလိုက်ပေါ့ ..
ဟုပြန်ပြောရင်း မျက်လုံးက ကျွန်မရင်ညွန့်ဆီဝေ့သွားသည်ကိုသတိထားမိလိုက်သည်၊ ကျွန်မကလဲ ဒီနေ့လည်
ဟိုက်အင်္ကျီဝတ်လာခဲ့သည်၊ အောက်မှာလည်း ဘရာစီယာ အပြတ်လေးနှင့် ဆိုတော့ နို့အုံကို သုံးပုံတစ်ပုံလောက်
ဘဲ လုံအောင်ထိမ်းထားနိုင်သည်၊ ကျွန်မလည်း စကားပြောရင်းက ဆရာပိုစိတ်ဝင်စားသွားအောင် စားပွဲကို လက်
ထောက်ပြီး ကိုယ်ကို နဲနဲကုန်းလိုက်သောအခါမှာတော့ ဟိုက်နေတဲ့လည်ဟာ ပိုဟိုက်သွားပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
ဆရာက စကားပြောကောင်းတော့ ရီစရာလေးပါလာတဲ့အခါ အမှတ်တမဲ့ပုံစံနဲ့ ဆရာ့ပေါင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်
သေးတယ်၊ ဆရာကလဲ မခေပါဘူး၊ မိန်းမကျမ်းကျေတယ်လို့ပြောရမယ်၊ အမှတ်တမဲ့ပုံစံနဲ့ ခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့
ခြေထောက်ကို ကျွန်မတင်ပါးနဲ့ သွေးတိုးစမ်းသလို အသာထိလိုက်တယ်၊ ကျွန်မကလဲ ထိလာတဲ့ခြေထောက်ကို
နေရာပြင်မထိုင်ဘဲ သတိမထားမိတဲ့ပုံမျိုး ဘဲနေလိုက်ပြီး ဆရာနဲ့စကားဆက်ပြောနေလိုက်တယ်၊ ခဏလေးကြာ
ပူစူးမ မပြန်သေးဘူးမဟုတ်လား .. ဆရာတံခါးပိတ်ထားလိုက်မယ် ..
ပိတ်ထားလိုက်လေ .. ပူစူးမ ရေအိမ်ခဏ၀င်အုံးမယ် ..
ဆရာလဲ အကင်းပါးတဲ့ သူတဦးဘဲ ဆိုတော့ ပူစူးမ ဘာလိုချင်တယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပုံရတယ်။
ကျွန်မလဲ အသာထပြီး ရေအိမ်ဆီကို အသာလျှောက်သွားလိုက်တယ်၊ ဆရာကျွန်မနောက်ကျောကိုကြည့်နေမယ်
ဆိုတာ လှည့်မကြည့်လဲ သိနေပါတယ်၊
တိုက်ခန်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာက တွဲထားတော့၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကျွန်မထမီကိုချွတ်
အတွင်းခံဘောင်းဘီပါချွတ်ပြီး ကျွန်မ စောက်ဖုတ်ကို ဆပ်ပြာမွှေးနဲ့ ကျကျနနဆေးကြောလိုက်ပါတယ်၊
တော်ကြာ ဆရာနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ အနံ့အသက်က နံနေရင်မကောင်းဘူးလေ၊ မနက်က ရေချိုးလာပေမဲ့
စာသင်ခန်းထဲထိုင်နေတာက ၂နာရီကျော်တောင်ကြာပြီဆိုတော့ ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ၊ ရေဆေးပြီး အသင့်တန်း
ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ ဆရာ့ပုဆိုးစုတ်နဲ့သေသေချာချာသုတ်လိုက်ပါတယ်၊ ပြီး ဘောင်းဘီကိုပြန်မ၀တ်တော့ဘဲ တန်း
ပေါ်မှာအသာလွှားပြီး ထမီကို ကောက်စွတ်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အပြင်ရောက်တော့ အရှေ့ခန်းမှာ ဆရာကို မတွေ့တာနဲ့ ဆရာ့အခန်းထဲလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်၊ အခန်းထဲမှာ
ဆရာက အပြင်ခံအင်္ကျီကို ချွတ်ပြီးတန်းမှာ ချိတ်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်၊
ဆရာ့အခန်းထဲမှာ သောက်ရေများရှိမလားလို့ .. ကျွန်မက မေးလဲမေးရင်းလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်၊ အပြင်မှာ
ကျောင်းသားတွေသောက်တဲ့သောက်ရေအိုးရှိတာကိုသိရဲ့သားနဲ့ အခန်းထဲဝင်လာပြီး မေးတဲ့ ကျွန်မမေးခွန်းကို
ရှိတယ် .. ကုတင်ဘေးက စားပွဲပေါ်မှာ .. စားပွဲကို မေးထိုးပြရင်း ဆရာကပြန်ဖြေလိုက်တယ်၊
ကျွန်မလဲ ကုတင်ပေါ်ထိုင်ရင်း စားပွဲပေါ်ရှိ ရေတကောင်းထဲကရေကို ဖန်ခွက်ထဲ ငှဲ့ထဲ့လိုက်တယ်၊ ဆရာလဲ
ကျွန်မ နားဝင်ထိုင်ပြီး ကျွန်မပုခုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်တယ်၊
အိုး ... ကျွန်မရဲ့ ရုတ်တရက်အော်သံကြောင့် ဆရာလဲ လန့်ဖြတ်ပြီး ဖက်ထားတဲ့ လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်၊
ဆရာကလဲ အင်္ကျီတွေ ကျေကုန်ရင် အိမ်ပြန်ရခက်နေအုံးမယ် ..
ကျွန်မပြောသံကြားမှ သက်ပြင်းအသာချပြီး ..
ဟုတ်သားဘဲ .. ဟုဆိုကာ ကျွန်မအင်္ကျီကြယ်သီးများကိုဖြုတ်နေပါသည်၊ ကျွန်မလဲ ဆရာ့အင်္ကျီကြယ်သီးများကို
ဆရာ .. ပူစူးမကို အထင်သေးသွားပြီလား ..
ဆရာ နားလည်ပါတယ် ပူစူးမရယ် .. ဟုပြန်ပြောရင်း ကျွန်မအင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပါသည်၊
ပူစူးမ က ဆရာ့အရင် တယောက်နဲ့ဘဲ အခုလိုနေဘူးတာ .. အခုသူက မအားတော့လို့ ပူစူးမလဲ ဆန္ဒကိုမထိန်း
နိုင်ဘဲ ဆရာ့ကို အခုလို ...
ကဲကဲ .. ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့ .. အားလုံးဆရာသဘောပေါက်ပါတယ် .. ပူစူးမ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်အောင် ဆရာ
ဖြည့်ပေးမယ် .. ဟုတ်ပြီလား ..
ပြောပြောဆိုဆို ဆရာက သူ့နှုတ်ခမ်းထူကြီးနဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကို စုတ်ယူလိုက်ပါတော့သည်၊
ကျွန်မလဲ ငတ်နေတာ အတော်ကြာပြီဆိုတော့ အငန်းမရ ပြန်လည်စုတ်ယူနေမိပါတော့သည်၊ ဒီလို တယောက်နဲ့
တယောက် နှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်ယူလိုက်၊ လျှာ လျှာချင်းစုတ်ယူလိုက်၊ အပြန်အလှန် အငန်းမရ နမ်းကြရင်း ဆရာ့
အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်ပါသည်၊ ဆရာကလည်း ကျွန်မ ဘရာစီယာကို ချွတ်ချလိုက်ပါသည်၊ အတော်ကြာ
တယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ကာ အပြန်အလှန်နမ်းနေကြရင်း အတော်ကြာတော့ ကျွန်မက ဆရာ့ကို ကျွန်မ
ရှေ့သို ဆွဲထူလိုက်ပါသည်၊ ဒီတော့ ကျွန်မက ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်လျှက် ဆရာ က ကျွန်မရှေ့တွင် မတ်တတ်
ရပ်လျှက် အနေအထားမျိုးသို့ရောက်သွားပါသည်၊ ဆရာ့ခါးပိုင်းမှာလည်း ကျွန်မမျက်နှာနဲ့ တပြေးညီလေးဖြစ်နေ
ပါတော့သည်၊ ကျွန်မလဲ ဆရာ့လုံချည်ကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်မှ
ရုန်းကန်နေသော ဆရာ့လီးကြီးမှာ ဘောင်းဘီစုတ်တော့မတတ် ဖေါင်းကားနေပါတော့သည်၊ ကျွန်မလဲ
ဘောင်းဘီပေါ်မှ ဆရာ့လီးကြီးကို အသာပွတ်ပေးရင်း ဘောင်းဘီကို အသာ လှန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့
လီးကြီးမှ ငေါက်ကနဲ ရုန်းကန်ကာ ဘွားကနဲ ပေါ်လာပါတော့သည်၊ ဒါဟာ ဒုတိယမြောက် ကျွန်မတွေ့ဘူးတဲ့
လီးကြီးပါဘဲ၊ လီးကို အသာဆုတ်ကိုင်လိုက်ရင်း သေသေချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အရှည်ကတော့
အကိုလေးလောက်ရှိပေမဲ့ လုံးပတ်က နဲနဲသွယ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အကိုလေး ကို ဖြောင့်ဖြောင့်
ကြီးမနေဘဲ အထက်ဖက်ကို ကော့ကာ ဒစ်က ပိုကားသယောင်ရှိပါတယ်၊ လီးကို ပွတ်ကစားရင်း ဆရာ့ခါးကို
လှမ်းဖက်ကာ ကျွန်မအရှေ့ကိုတိုးယူလိုက်ပါတယ်၊ ပြီး အချောင်းတလျှောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့အထက်အောက် အသာ
ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင်း ဒစ်ကို ပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့လိုက်ပါတယ်၊ ဒစ်တလျှောက် လျှာနဲ့လှိမ့်ကစားရင်း ဆရာ့ကို အသာ
မော့ကြည့်လိုက်တော့ တဟင်းဟင်း နဲ့ ခေါင်းကြီးမော့ကာ ခါးထောက်ပြီး ဖီလင်တက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါ
တယ်။ လက်ကလဲ ဥကိုကိုင်ကစားရင်း တဖက်က ပေါင်အောက်လျှိုကာ ဆရာ့တင်ပါးကို ပွတ်ပေးနေပါတယ်၊
အကိုလေးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မဟာ ယောက်ကျားတွေရဲ့အထာကိုကောင်းကောင်းသိနေပါပြီ၊ ဆရာ ဖီလင်
ကောင်းကောင်းတက်နေတဲ့ အခိုက် ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ရင်း ဆရာ့ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့အလှည့်ဆိုတာ
ဆရာ သဘောပေါက်သွားပုံရပါတယ်၊ ကျွန်မကို ကုတင်ပေါ် အသာတွန်းချရင်း ထမီကို ဆွဲချွတ်ယူလိုက်ပါ
တယ်၊ ကျွန်မလဲ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ လဲနေပါတယ်၊ ဆရာလဲ အပေါ်စီးကနေ
အကိုလေးရဲ့ပွတ်ကစားတဲ့အရှိန်ကြောင့် နို့အုံက သာမန် ၁၆ နှစ်မိန်းခလေးတွေထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသယောင်
ထင်ရပေမဲ့ လုံးဝန်းနေပါတယ်၊ ပြီးတော့ အနည်းငယ် သိမ်သွားသောခါး၊ မသိမသာလေး မို့တက်နေတဲ့ ၀မ်းဗိုက်
ဖွေးဖွေးလေး အောက်က အမွေးနုလေးများဖုံးနေတဲ့ ဆီးခုံ၊ ပြီးတော့ ဖေါင်းဖေါင်းလေးနဲ့ အမွေးအ`မှင်ရှင်းနေ
သော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများ၊ ကို ဆရာမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေပါတော့တယ်။
ကျွန်မလဲ ကျွန်မကို ငေးကြည့်နေသော ဆရာ့လက်ကိုအသာဆွဲယူလိုက်ပါတယ်၊ ဆရာလည်းအလိုက်သင့် ကျွန်မ
ကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျလာပြီး ကျွန်မခေါင်းကိုကိုင်ကာ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကို စုတ်နမ်းနေပြန်ပါတော့တယ်၊ ပြီးတော့
တဖြေးဖြေးအောက်သို လျောဆင်းလာပြီး ကျွန်မလည်တိုင်တလျှောက် လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲနေပြန်ပါတယ်၊ ကျွန်မလဲ
အသဲယားလာကာ ဆရာ့ကျောပြင်ကြီးကိုပြန်လည်ဖက်တွယ်ထားပါတော့တယ်၊ တဖြေးဖြေးနဲ့ လျှောဆင်းလာပြီ
ကျွန်မရင်0x150ွှန့် ပြီးတော့ လုံးဝန်းတဲ့ ကျွန်မရင်အုံတ၀ိုက်ကို နှုတ်ခမ်းနဲ့နမ်းရင်း လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲနေပါတယ်၊
လက်ကလဲ နို့အုံတခုလုံးကို ကိုင်ပြီး ချေကစားနေပါတယ်၊ ပြီတော့နို့အုံကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း ဖေါင်းကြွလာတဲ့ နို့သီး
ခေါင်းလေးကို စုတ်ယူလိုက်ရင်းလျှာနဲ့ မွှေကစားလိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်မလဲ အရသာ ကောင်းကောင်းတွေ့ကာ
ဆရာ့ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း တဟင်းဟင်းငြီးတွားကာ ကော့လန်နေပါတော့သည်၊ နို့အုံကို တဖက်စီ လက်နှစ်ဖက်နဲ့
ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆုတ်ကိုင်ရင်း ကြွတက်နေသော နို့သီးခေါင်းကိုတလှည့်စီစို့နေရင်း ခေါင်းက ၀မ်းဗိုက်သားပေါ်
ရွှေ့လိုက်ပါသည်၊ ၀မ်းဗိုက်သားတပြင်လုံး နှာခေါင်းနဲ့ရော ပါးစပ်နဲ့ပါ နမ်းရှုတ်ရင်း ကျွန်မချက်လေးထဲ
လျှာထိုးကာ ကလိနေပါတော့သည်၊ လက်ကတော့ နို့အုံကို ဆုတ်နယ်နေတုန်းပါဘဲ၊ ပြီးတော့ နို့ကိုင်ထားတဲ့
လက်တဖက်ကိုလွှတ်ကာ ကျွန်မပေါင်အတွင်းသားတလျှောက်ပွတ်သတ်ပေးနေပါတော့သည်၊ ပါးစပ်ကတော့
၀မ်းဗိုက်တလျှောက်နမ်းလိုက် နို့အုံဆီပြန်တက်နမ်းလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုတ်နေပါသည်၊ ကျွန်မလဲ ဖီလင် မြင့်သထက်
မြင့်လာကာ လူးလှိမ့်နေပါတော့သည်၊ ပေါင်တလျှောက်ပွတ်သတ်နေရင်း တချက်မှာတော့ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ပေါ်
ရောက်လာပါသည်၊ စောက်ဖုတ်တပြင်လုံးကို ဖွဖွပွတ်ရင်း အကွဲကြောင်းထဲလက်ထိုးထည့်ကာ
ကျွန်မစောက်စေ့လေးကို ပွတ်ချေလိုက်ပါတော့သည်၊ ဒီလို အရသာမျိုးမခံစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဟာ
တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ကြက်သီးမွှေးလေးများတောင်ထမိပါသည်၊ ဆရာဟာ အစေ့ကို ပွတ်ကစားနေရင်းက
ကိုယ်ကို တဖြေးဖြေး အောက်သို့လျှောလာကာ ကျွန်မပေါင်ကြားသို့တိုးဝင်လာပါတော့သည်၊ ကျွန်မလည်း ဆရာ
ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆရာကိုယ်လုံးဝင်ဆံ့အောင် ဟပေးလိုက်ပါ
သည်၊ တစ်ကိုယ်လုံးပေါင်ကြားထဲကျသွားပြီဆိုတော့ ဆရာ့မျက်နှာဟာ ကျွန်မစောက်ဖုတ်နဲ့ တည့်နေပါပြီ၊
ကျွန်မလဲ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုထောင်အသာဖြဲပေးလိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဟာ ဟသွားပြီး စောက်စေ့လေးဟာ ပြူ
ထွက်လာပါတယ်၊ ပြူထွက်လာတဲ့စောက်စေ့လေးကို ဆရာဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ပြင်းပြင်းလေးစုတ်လိုက်ပါတယ်၊
အိုး .. ပါးစပ်က အသံထွက် အော်ကာကျွန်မလဲ အသဲတွေအူတွေပြုတ်ထွက်မတတ် ခံစားလိုက်ရပြီး ဆရာ့ခေါင်း
ကို ပေါင်နှစ်ချောင်းနဲ့ တအား0x150ှပ်ထားလိုက်မိပါတော့တယ်၊ ဆရာလဲ ကျွန်မမခံနိုင်တာသိလို့ထင်ပါရဲ့ စုတ်နေ
တာ အသာရပ်လိုက်ပြီး အတွင်းသားတလျှောက် အထက်အောက်လျှာနဲ့ရက်နေပါတော့သည်၊ တခါတခါစောက်
ခေါင်းအတွင်းလျှာကို အဆုံးထိထိုးသွင်းရက်နေပါတောတယ်။ ဒီလိုဘဲ အစေ့လေးကိုစုတ်ယူလိုက် လျှာနဲ့ကလိ
လိုက် အတွင်းသားတလျှောက်အထက်အောက် အပြန်အလှန်ရက်လိုက် စောက်ခေါင်းအတွင်းလျှာကိုထိုးထည့်
စုတ် ယူလိုက်နဲ့ တလှည့်ပြီးတလှည့် လှည့်ပတ်ကစားနေပါနေပါတော့တယ်၊ ကျွန်မလဲ ဖီလင်တက်သထက်
ဆရာလဲတော်တော်ကြာစုတ်ရက်နေပြီး ကျွန်မမောလောက်ပြီဆိုတော့မှ အသာရပ်ကာ လိုးရန်ပြင်တော့သည်၊
ကျွန်မလဲ ဒူးထောက်ကာ ကျွန်မခြေထောက်ကိုေ`မှာက်ကိုင်ကာ လိုးဟန်ပြင်နေသောဆရာ့ကို ကြည့်ပြီး
ဆရာ .. ခဏ .. ဟုပြောကာ ကုတင်ဘေးတွင်မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်ပါသည်၊ ကျွန်မလဲ ကုတင်ပေါ်တွင် ပေါင်ဖြဲ
ဒူးထောက်ကာ မျက်နှာကို အောက်စိုက်ပြီး ခါးလေးကို ကော့ကာ ကုန်းပေးလိုက်ပါသည်၊ ပေါင်ကားရပ်နေသော
ဆရာလီးနဲ့ အနောက်ဖက်သို့ပြူထွက်လာသော ကျွန်မစောက်ဖုတ်တို့က တတန်းထဲဖြစ်သွားပါသည်၊
ဒီနည်းကတော့ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးနည်းဘဲဖြစ်ပါသည်၊ ဆောင့်ချက်တိုင်းကောင်းကောင်းထိပြီး ဆောင့်တဲ့သူ
အဖို့မှာလဲ မပင်ပန်းဘဲ ကြာကြာဆောင့်နိုင်ပါသည်၊
ဆရာလည်း ကုန်းပေးလာသော ကျွန်မတင်ပါးကို အသာကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ ကော့နေသောလီးကို အသာထိန်းပြီး
ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပါသည်၊ အရည်တွေရွှဲနေသောကျွန်မစောက်ဖုတ်အတွင်း ဆရာ့လီးမှာ
ခပ်ကြပ်ကြပ်လေးတိုးဝင်လာပါသည်၊ အကိုလေးနဲ့ အကြိမ်ပေါင်း များစွာလိုးခဲ့တဲ့အတွက်နာကျင်မှုဒဏ်ကိုတော့
မခံရတော့ပါ၊ ဆရာလဲ မိန်းမကြမ်းကျေသူပီပီ သတိနဲ့ တဖြေးဖြေးထိုးထည့်လိုက် ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့ သွေးတိုးစမ်း
ကာ တထစ်ပြီးတထစ်ထည့်နေပါသည်၊ အဆုံးထိဝင်သွားတော့ ၄-၅ ချက်မျှ ဖြေးဖြေးဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်း
လိုက်နဲ့ ချောမွေ့အောင်လုပ်နေပါသည်၊ အရည်ရွှဲကာ ချောမွေ့သွားတော့ ကျွန်မတင်ပါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံ
ကိုင်ကာ ဆောင့်ပါတော့သည်၊ လီးကို အဆုံးထိဆွဲထုတ်လိုက် ပြီးအဆုံးထိဆောင့်သွင်းလိုက်နဲ့ စည်းချက်မှန်မှန်
ဆောင့်နေပါတော့သည်၊ ကျွန်မလဲ ဆရာ့ဆောင့်ချက်တိုင်း အိပ်ရာကိုတင်းတင်းဆုတ်ပြီး တအင့်အင့်နဲ့
ကာမသုခကို အပြည့်အ၀ခံစားနေတော့သည်။ ဆရာလဲစိတ်ထလာပြီး ဆောင့်ချက်သွက်သထက်သွက်လာသလို
ကျွန်မလဲ ကာမစည်းစိမ် တက်သထက်တက်လာပါတော့သည်၊ ခဏကြာတော့ ဆရာလည်း နောက်ဆုံးတချက်
အတင်းဆောင့်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်များပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်၊
ကျွန်မလဲ ဆရာ့နောက်ဆုံး တချက်ကို စောက်ဖုတ်နဲ့ဆွဲ0x150ှစ်ရင်း အကြောများတင်းကာ ပြီးသွားပါတော့သည်၊
ပီးသွားတော့ ကျွန်မလဲမောပန်းကာ ကုတင်ပေါ်သို ၀မ်းလျားမှောက်ကျသွားပါတော့သည်၊ ဆရာလည်း
ကျွန်မကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ကျလာပါတော့သည်။ ခဏမျှအနားယူပြီး
ပူစူးမ .. ဘယ်လိုလဲ ဆန္ဒပြည့်ရဲ့လား ..
အား ဆရာကလဲ .. ဘာတွေမေးမှန်းလဲမသိဘူး .. မသိဘူး သွား ...
ပူစူးမနဲ့ လိုးရတာ ကောင်းလိုက်တာကွာ .. ဆရာဒီလိုတခါမှကောင်းကောင်းမလိုးဘူးဘူး ..
ဟုတ်ရဲ့လား ဆရာရယ် .. ဟုတ်မှလဲ ပြောပါနော် .. မူနွဲ့နွဲ့လေးနဲ့ ပြန်ပြေရင်း ထမီကို ကောက်ယူကာ ရေချိုးခန်း
ဆီသို့လှမ်းခဲ့ပါတော့သည်၊ ဆေးကြောသုတ်သင်ပြီး ဘောင်းဘီနဲ့ထမီကို ပြန်ဝတ်ကာ အခန်းဆီသို့ပြန်လာခဲ့ပါ
ပူစူးမ နောက်လဲ ဆရာ့ဆီကိုမကြာခဏလာနော် .. ပူစူးမအတွက်ဆို ဆရာ့အခန်းတံခါးအမြဲဖွင့်ထားပြီးသားဘဲ ..
အခြေအနေအရပေါ့ဆရာရယ် .. ဟုမယုတ်မလွန်ပြန်ပြောရင်း
ပူစူးမလဲ ဆရာနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ကြိုက်ပါတယ် ..
အင်း .. ဟုအသံခတ်ဆွဲဆွဲဖြင့်ပြောရင်း အင်္ကျီကိုဝတ်နေလေသည်၊ ဆရာလဲ အိပ်ရာပေါ်မှထလာကာ ကြယ်သီး
ဆရာတော့ ပူစူးမကို နေ့တိုင်းမျှော်နေမိမှာဘဲ .. ဟုပြောပါသည်၊
ပူစူးမ သွားတော့မယ်နော် ဆရာ .. တော်ကြာကျောင်းသားတွေရောက်လာရင် တွေ့သွားအုံးမယ်၊ ဆရာလဲရေချိုး
ပြောပြောဆိုဆို ဆရာ့ကို နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးကာ ထွက်လာခဲ့ပါတော့သည်။
ဒီလိုနဲ့ကျွန်မမှာ လစ်ရင်လစ်သလို အကိုလေးနဲ့ စခန်းသွားလိုက်၊ စိတ်ထလာရင် ဆရာ့အခန်းသွားလိုက်နဲ့
အဲတနှစ်လောက်အကြာမှာတော့ ဆွေမျိုးများ၏ခေါ်ယူမှုကြောင့် ကျွန်မတို့မိသားတစ်စုလုံး အမေရိကန်နိုင်ငံ
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:02